Dr. Tint Swe's Writings: August 2017
ဆရာ ကျမသားဦးလေးမွေးတုန်းကပြနေတဲ့ OG ယခုလက်ရှိ ပါမောက္ခ အပျိုကြီးကို ကျမက မေးကြည့်ပါတယ်၊ ရိုးရိုးမွေးချင်ပါတယ် ရမလားလို့ပါ။ သူကပြောပါတယ် ရိုးရိုးမွေးရင် အနည်းဆုံး ၁ဝ နာရီကြာလို့ မင်းတို့ ငါ့ကို ၁ဝ ဆ ပေးနိုင်သလားတဲ့။ မွေးကလည်း မွေးခါနီး တခြား OG ထပ်ပြောင်းရင်လည်း အဆူခံရမှာကြောက်လို့ ပြောင်းမပြရဲ။ ဘယ်လောက်တောင် အခဲ့လဲ ဆရာရယ်၊့့ ဆေးရုံ PR ဆောင်မှာ တာဝန်ကျတဲ့ AS နဲ့ မွေးခဲ့ရတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့က Master တန်းတက်နေတဲံ Dr တွေပါ။ တပူပေါ်နှစ်ပူဆင့် အချင်းကကပ်နေလို့ မသေတာ ကံကောင်းပါ။ ကလေးက ညှပ်ဆွဲ မွေးခဲ့ရပါတယ။် အဆင်မပြေတာများလို့ ကံမကောင်းဘူးလို့ဘဲ သတ်မှတ်လိုက်ပါတယ်။
ဆောရီး။ အဲလိုတကယ်ဖြစ်တာမျိုးကို သိချင်တယ်။ ယမုန်နာဒုက္ခသည်ဆေးခန်းလေးမှာ ညှပ်ဆွဲမေးရတာ ၄၉ ယောက် ရှိတယ်။ အချင်းကပ်တာလဲ ၅ ယောက်ရှိတယ်။ တယောက်ကို အခုထိမှတ်မိနေတယ်။ ကျွန်တော်က မြို့ထဲမှာ အစည်းအဝေးတခု တက်နေရတုံး ကလေးမွေးတော့ ဆရာမတွေကမွေးပေးတယ်။ အချင်းကကပ်နေလို့ ဖုန်းဆက်တယ်။ ဆရာကတော်က တာဝန်ယူပြီး ဆေးရုံပို့ပေးဘို့စီစဉ်နေတယ်။ ကျွန်တော်က လူနာအခြေအနေကို ဖုန်းဆက်မေးနေတယ်။ သွေးဖိအားလဲကောင်း၊ သွေးဆင်းတာလဲ လိုတာထက်မများ။ လူနာကိုမေးခိုင်းတော့ လူနာက ဆရာပြန်လာတဲ့အထိ စောင့်ချင်တယ်ဆိုလို့ စောင့်စေတယ်။ အစည်းအဝေးအပြန် ဆေးခန်းကိုတန်းပြီးဝင်တယ်။ ကုတ်အင်္ကျီနဲ့ နက်တိုင်တွေ ချွတ်ဖြုတ်ပြီး အချင်းကို ဆွဲထုတ်ပေးရတယ်။ ၂ မိနစ်တောင်မကြာလိုက်ပါ။
အချိန်ကြာတတ်တာ ဟုတ်တော့ ဟုတ်တယ်။ ကျွန်တော်တို့ ထမင်းငတ်တာနဲ့ မအိပ်ရတာတွေ မနည်းလှဘူး။ ဒါပေမဲ့ ဆေးခန်းသော့ဖွင့်ချိန်မမီဘဲ တံခါးဝမှာမွေးရတာ ၂ ယောက်လဲ ရှိသေးတယ်။ ယမုန်နာဆေးခန်းကို လွမ်းပါရဲ့။
(ဓါတ်ပုံ = ၁၉-၉-၂ဝဝ၈ နေ့ နံနက် ၃ နာရီ ၂ဝ မိနစ်အချိန်၊ ယမုန်နာဆေးခန်းမှာ မွေးခဲ့တဲ့ကလေး)
ယူကျုပေါ်မှာ ဒေါင်းလုတ်လုပ်နိုင်တဲ့ အသက်ကယ်တာနဲ့ဆိုင်တဲ့ ဗီဒီယိုတွေရှိတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၃ နှစ်အတွင်းကရှိတဲ့ အဲတာတာတွေကို တူရကီ ဆေးသုတေသနပညာရှင်တွေက ဆန်းစစ်တယ်။ အဲလို အသက်ကယ်နည်းတွေထဲမှာ (၁) Cardio-pulmonary Resuscitation (CPR) ခေါ်တဲ့ နှလုံး-အဆုပ် ပြန်လည် အလုပ်လုပ်စေနည်းနဲ့ (၂) Basic Life Support (BLS) အခြေခံအသက်ထောက်ကူနည်းတွေ ပါဝင်ပါတယ်။ စုစုပေါင်း ၂ဝ၉ ခုရှိတယ်။ အားလုံးထဲက ၁၁့၅% ကသာ CPR Guideline လမ်းညွှန်နဲ့ကိုက်ညီတယ်လို့ တွေ့လာရတယ်။
အင်တာနက်ကနေရတဲ့ပုံတွေပြပြီး ကျနော်-ကျမမှာ အဲလိုဖြစ်နေလို့ပါမေးတာတိုင်းကို မဖြေပါ။ ယူကျုက ဗီဒီယိုတိုင်းကို မညွှန်ပါ။
CPR လုပ်နည်းပုံမှာ အမျိုးသမီးတယောက်ကို ရွယ်တူအမျိုးသားတယောက်က အသက်ကယ်အနမ်းနည်းလုပ်ပြနေတယ်။ တကယ့်အဖြစ်အပျက်တွေက အဲလိုမဟုတ်ပါ။ သားဖွါးခန်းမှာ ညစ်ပေနေတဲ့ အသက်မရှူနိုင်တဲ့ ကလေးကို နှာခေါင်းစည်း ကဗျာကယာချွတ်ပြီး အသက်ကယ်ရပါတယ်။
CPR နှလုံး-အဆုတ် ပြန်လည်အလုပ်လုပ်စေရန်ပြုစုနည်း https://doctortintswe.blogspot.com/2015/06/cpr.html
CPR for newborn babies မွေးကာစကလေး CPR လုပ်ပေးနည်း https://doctortintswe.blogspot.com/2015/06/cpr-for-newborn-babies-cpr.html
ကျွန်တော့်ပို့စ်တခု = ကျည်းကန်ရှင်ကြီး
တော သူ = အဲလိုဘုရားမဟောဘူး
ကြော်ငြာဆေးတင်ရင် ဘယ်မှာဝယ်ရမလဲ မေးကြတယ်။ ဆေးအတုတင်ရင် ဘယ်လိုသောက်ရမလဲ မေးကြတယ်။ သတ်ပုံကိုသိစေချင်လို့တင်ရင် ကဗျာပဲဖတ်ကြတယ်။ စာထဲကအချက်အလက်ကို ငြင်းချင်ကြတယ်။ အခုဟာက စာထဲမပါတာကို လာငြင်းတယ်။ သတ်ပုံလေးမှာ သနားစရာ၊ လိုရင်းမရောက်ပါ။
ကျေးဇူးပြု၍ အလင်္ကာရဲ့အဓိပ္ပါယ်လေး ရှင်းပြပါလားဆရာ။
စာရေးသားရာမှာ ဝေါဟာရစကားလုံးတွေနဲ့ ဝါကျ ခေါ် စာကြောင်းတွေရေးရတယ်။ ဝါကျတိုင်းဟာ သဒ္ဒါမှန်ရတယ်။ စကားအသုံးအနှုန်းမှန်ရမယ်။ စာစီစာကုံးရေးနည်းကို ကျောင်းတွေမှာသင်ရသလို နိဒါန်း၊ စာကိုယ်၊ နိဂုံးလို့ခေါ်တဲ့ အပိုင်း သုံးပိုင်းပါစေရတယ်။ စာပိုဒ်တွေခွဲသင့်တာ ခွဲရတယ်။
စာကို ကျစ်လျစ်သိပ်သည်းအောင်ရေးတာ ကောင်းတယ်။ ဆိုလိုချင်တာကို စာဖတ်သူနားလည်စေရမယ်။ တန်းကနည်း နားလည်စေတာနဲ့ အချိန်ဆွဲပြီးသိအောင်ရေးတာလို့ ရှိတယ်။ မှန်ကန်၊ ရှင်းလင်း၊ ကျစ်လျစ်၊ ပြေပြစ်နေရင် ကောင်းတယ်။ စာကိုတန်ဆာဆင်ရေးတာကို အလင်္ကာပါတယ်လို့ခေါ်တယ်။ ငါးနည်းရှိတယ်လို့ ဖတ်မှတ်ထားပါတယ်။
၁။ ဝင်္ကဝုတ္တိအလင်္ကာ ခေါ် သွယ်ဝိုက်တန်ဆာဆင်ခြင်း = ပြောလိုတဲ့အချက်အလက်တွေကို လှလှပပ အဖွဲ့အနွဲ့ အလှည့်တွေနဲ့ ရေးနည်းဖြစ်တယ်။
၂။ မြည်သံစွဲအလင်္ကာ ခေါ် မြည်သံကိုစွဲ၍ ပြုဖွဲ့တန်ဆာဆင်ခြင်း = ဇာတ်လမ်းဇာတ်ကွက်ထဲ၊ စာထဲမှာ လိုတဲ့နေရာတွေမှာ စကားပြောဆိုသံ၊ အာမေဋိတ်သံ၊ ပေါက်ကွဲသံ၊ အော်ဟစ်သံ၊ သီချင်းဆိုသံ စတာတွေကိုပါ ထည့်ရေးနည်းဖြစ်တယ်။
၃။ ဥပမာအလင်္ကာ ခေါ် ခိုင်းနှိုင်း အဆင်တန်ဆာဆင်ခြင်း = ကိုယ်ရေးနေတဲ့ ဇတ်ကြောင်းနဲ့မဆိုင်တဲ့ တခြားဇတ်ကိုပါ နမူနာပေးထည့်ရေးနည်းဖြစ်တယ်။
၄။ ရူပကအလင်္ကာ ခေါ် ထပ်တူပြုတန်ဆာဆင်ခြင်း = တခြားဖြစ်ရပ်တခုခုကို ပုံတူပွား ထပ်တူပြုပြီး ထည့်ရေးနည်း ဖြစ်တယ်။
၅။ အတိသယဝုတ္တိအလင်္ကာ ခေါ် လွန်ကဲဖွဲ့အဆင်တန်ဆာဆင်ခြင်း = အမှန်တကယ်ဖြစ်ပျက်နေတာတွေထက် လွန်ကဲပြီး၊ စိတ်ကူးလွန်ပုံရိပ်အဖြစ်အပျက်တွေကိုပါထည့်ရေးနည်းဖြစ်တယ်။ စိတ်ကူးဉာဏ်ကွန့်ရေးသားနည်းဖြစ်တယ်။
ကဗျာသမား၊ စာသမားတွေက ရသ ခေါ် ခံစားမှုကို ပေးနိုင်စေရမယ်လို့ ပြောကြတယ်။ ရသတွေ မိုးမွှန်နေတဲ့ကဗျာမျိုးကို မကြိုက်ပါ။ စာဖတ်ပြီး မျက်ရည်တွေဝေ၊ လွမ်းဆွေးနေစေတာမျိုး အားမပေးချင်ပါ။ မရှိတဲ့ ဝကို ဝိလုပ်ရေးတာမျိုးလည်း တန်ဖိုးမထားချင်ပါ။
အလင်္ကာတွေနဲ့ တန်ဆာဆင်ရေးတိုင်းတော့ စာရေးကောင်းတယ်လို့ မယူဆပါ။ မော်ဒန်တို့ ဆူပါမော်ဒန်တို့ ပြောကြ-ရေးကြတယ်။ ကာရန်မပါတာကို အမွှမ်းတင်လာကြတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ ကာရန်ပါတာရှာပြီး ရေးတတ်သလောက် ရေးတယ်။ ဒိတ်အောက်စာလို့ခေါ်ပေါ့။ Smile!
အရီးနဲ့ အရည်းလည်း သတ်ပုံမှားတတ်သလားဆရာ။
၁။ ဆရာရှင့် ကျွန်မက အသက်၃၅ နှစ်ပါ။ ညာဖက်ခြေသလုံးမှာ အကြောထုံးလေးတွေဖြစ်လာလို့ အခုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ ခြေမျက်စိနားမှာပါတွေ့လာရတယ်။ အစကသတိမထားမိပေမယ့် ဒီမနက်အိပ်ယာနိုးတော့ ခြေထောက်ကတင်းတင်းကြီး ဖြစ်နေသလိုလိုမို့နှိပ်ကြည့်တော့ စမ်းမိတာပါ။ ခြေသလုံးကကြောထုံးကတော့ နှစ်အတော်ကြာပါပြီ။ ဘယ်လိုကုသမှုမျိုး ခံယူရမလဲသိချင်ပါတယ်ရှင့်။
ဗမာစကားမှာ အကြောဆိုတာကို အလွယ် သုံးတတ်ကြတယ်။ Nerve အာရုံကြော၊ Muscle ကြွက်သား၊ Tendon အရွတ်၊ အကုန် အကြောချည်းဘဲ ပြောတယ်။ တခါတလေ ဘာပြောတယ်ဆိုတာ မှန်းမရတတ်ဘူး။ ရှက်ကြောပြတ်တာတော့ ဆရာဝန်ရော၊ လူနာပါ အတူတူ သိကြတယ်။ တခြားလူမျိုးတွေက မသိကြရှာဘူး။
အသက် ၅ဝ ကျော်ရင် ၂ ယောက်မှာ ၁ ယောက်လောက် အနည်းနဲ့အများ ရှိလာတတ်တယ်။ အမျိုးသမီးတွေမှာ ပိုများတယ်။ မျိုးရိုး လိုက်တတ်တယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ရတာ၊ အဝလွန်တာ၊ သွေးဆုံးတာ၊ အသက်ကြီးတာ၊ အကြာကြီး ရပ်ရတာ၊ ခြေထောက် ခိုက်မိတာတွေကြောင့် ဖြစ်လာစေနိုင်တယ်။ Piles လိပ်ခေါင်းဆိုတာလည်း စအိုမှာ ဒီလိုသဘော ဖြစ်တာပါဘဲ။ ဒါ့အပြင် ခပ်ဆင်ဆင် Spider veins ပင့်ကူလို ဖြစ်နေတာလည်း ရှိတယ်။
ခြေထောက် ရောင်လာမယ်။ Cramps ကြွက်သား နာတာ ဖြစ်တတ်တယ်။ သူကို ခိုက်မိလို့ အနာဖြစ်ရင် ပျောက်ခဲလှတယ်။ အနာကို ခိုက်မိပြန်ရင် သွေးအလွန်ထွက်မယ်။ ခြေမျက်စိအနားမှာ ဖြစ်လေ့ရှိတယ်။ နှင်းခူနာလိုပါ ဖြစ်လာတတ်တယ်။ အသက်ကြီးသူတွေဆိုရင် Thrombophlebitis သွေးပြန်ကြောရောင်တာ ဖြစ်တတ်တယ်။ ပြဿနာ ကြီးတာက သိပ်ဆိုးမှပါ။ သွေးလျှောက်တာ နည်းလွန်းလာလို့။ လမ်းတောင် မလျှောက်နိုင်၊ မရပ်နိုင် ဖြစ်လာတယ်။ တချို့ကြ အနာက Carcinoma or Sarcoma ကင်ဆာ ပြောင်းသွားတတ် သေးတယ်။
ခြေထောက်မြှင့်ထားပြီး နားပါ။ Compression stockings ကြပ်အောင်စီမံထားတဲ့ ခြေအိမ်တမျိုး ဝတ်ထားပါ။ နာတာကို Ibuprofen သောက်ရတယ်။ Aspirin ကတော့ သွေးခဲတာအတွက်ပါ ကောင်းတယ်။ အစာလမ်း သွေးမယိုအောင်တော့ သတိထားပါ။ သွေးခဲတာဖြစ်ရင် သွေးမခဲဆေး Anti-coagulation ပေးမယ်။ Thrombectomy, Foam Sclerotherapy အခဲကိုခွဲထုတ်တာ လုပ်ရတယ်။
သွေးကြောထုံးတာကို သမားရိုးကျ ခွဲစိတ်နည်းက Vein stripping ဖြစ်တယ်။ ဖြစ်တဲ့သွေးပြန်ကြောကို ခွဲထုတ်ပြစ်တာပါ။ ခေတ်ပေါ်နည်းကတော့ Ultrasound သုံးပြီး Sclerotherapy နဲ့ ရေဒီယိုလှိုင်းသုံးတဲ့ Radiofrequency ablation နောက်ပြီး လေဆာသုံးတဲ့ Endovenous laser နည်းတွေဖြစ်တယ်။ ခြေထောက်ကနေ နှလုံးဆီကို ပြန်လာတဲ့ သွေးတွေရဲ့ ၉ဝ% က အတွင်းပိုင်းက သွေးပြန်ကြောတွေကနေ လုပ်ပေးတာမို့၊ သွေးကြောထုံး ဖြစ်စေတတ်တဲ့ အပေါ်ယံ သွေးပြန်ကြောကို ခွဲစိတ်ထုတ်ပြစ်တာ ပြဿနာမကြီးဘူး။
ခြေထောက် အဖျားပိုင်းကို မြှင့်ထားပြီး နားပါ၊ ထိုင်နေရင်လည်း ခြေထောက်တွေကို ချိတ်မထားနဲ့။ အောက်ပိုင်း အဝတ်အစား ခပ်ချောင်ချောင်ဝတ်။ ထမီ နဲ့ ဂါဝန်။ စကပ်လည်းရတယ်။ မတိုစေနဲ့ အကြောထုံးတာ လူမြင်မယ်။ အဝ မလွန်၊ အလွန် မဝစေနဲ့။ ရပ်ရတဲ့ အလုပ်မှန်သမျှ ရှောင်။ မတ်တတ်ရွာကလူတွေ သတိထား။ မရပ်ရအောင် ရေတောင် မချိုးနဲ့ ရေဘဲကူး။ ရှူပေါက်ရင်လည်း ရပ်မပေါက်နဲ့။ အမျိုးသမီးတွေ အဖြစ်များတာ ဒါ့ကြောင့်တော့ မဟုတ်ဘူး။ ကိုယ်ဝန်မဆောင်နဲ့။ သွေးမဆုံးစေနဲ့။ အသက် မကြီးစေနဲ့။
• Pregnancy and Varicose veins ကိုယ်ဝန်နဲ့ သွေးကြောထုံးခြင်း http://doctortintswe.blogspot.com/2015/04/pregnancy-and-varicose-veins.html
• Spider veins ပင့်ကူသွေးပြန်ကြောများ https://doctortintswe.blogspot.com/2015/02/spider-veins.html
• Varicose veins သွေးပြန်ကြောထုံးခြင်း http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/varicose-veins.html
ဥ ဦ ဦး ဖတ်တဲ့အခါမှာ
ဥ အက္ခရာ အု
ဦ အက္ခရာ အူ
ဦး အက္ခရာ အူး အသံရှည်ဖတ်ရပါတယ်။ သို့ မဟုတ်
ဦ အက္ခရာ အု လုံးကြီးတင်ဆံခတ် အူ
ဦး အက္ခရာ အု လုံးကြီးတင်ဆံခတ်အူဝစ္စနှစ်လုံးပေါက်အူးဆိုပြီးဖတ်နေကြတာတွေ့ ရပါတယ်ရှင်။ ဘယ်လိုဖတ်တာ အမှန်ဆိုတာရှင်းပြပေးစေချင်ပါတယ်ရှင်။
မြန်မာစာမှာ အက္ခရာအမည်ရတာ ၏၊ ၌၊ ၍ သုံးခုရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။
ဣ၊ ဤ၊ ဧ၊ ၏၊ ၌၊ ၍၊ ဥ၊ ဦ၊ ဦး၊ သြ၊ သြော်တို့ကိုလည်း အက္ခရာတွေလို့ ပြောဆိုပါသေးယ်။
ယခုမူ ကြည်လင်မရှိတော့ပြီ။ ကျနော်တို့တသိုက်အတွက် အစ်ကိုတဦး ညီတဦး ဆုံးရှုံးသကဲ့သို့ရှိ၏။
ကျွန်တော့်မှတ်ချက် - ယခုမူ ကြည်လင်သောသတ်ပုံများ မရှိတော့ပြီ။ အစ်ကိုတဦး ညီတဦး ဆုံးရှုံးသကဲ့သို့ရှိ၏။
ဆီလိုအပေါက်ရှာဆိုတာရှိတယ်။ အပေါက်သေးသေးလေးရှိလည်း ဆီကယိုစိမ့်ထွက်တာကိုပြောတာ။ တင်စားချက်မို့ သူများအပြစ်အနာအဆာကို စစ်စစ်ပေါက်ပေါက်လိုက်ရှာသူမျိုးကို အဲလိုခေါ်ကြတယ်။
အခုတွေ့နေရတာက တမျိုး။ ဆီတိုင်းကိုတော့ မရှာပါ၊ NLD ဆီပဲရှာတယ်။ အပြစ်လည်း ဟုတ်ချင်မှဟုတ်မယ်။ သူထင်တာကိုသာ လိုက်ပြောနေတဲ့လူစား။
ဘုန်းကြီးခေါင်း သန်းရှာ (ကန်တော့ပါ) နေတာနဲ့အတူပဲ။ ကြာတော့ ရီချင်လာတယ်။ သနားလာတယ်။ အဲလိုလူတွေက ပြောတော့ ဒီမိုကရေစီပါပဲ။ ဒါပေမယ့် စစ်အစိုးရလက်ထက်မှာ စီမံကိန်းနဲ့စိုက်ခိုင်းတဲ့ ကြက်ဆူဆီလိုပဲ။ ကြက်ဆူပင်ခြေမှာ နွားချေးချပေးတဲ့သူလည်း အခုထိ အနည်းအပါးတော့တွေ့တယ်။
ရခိုင်အရေးသည် နိုင်ငံရေးမဟုတ်၊ အကြမ်းဖက်မှုဖြစ်သည်လို့ အင်္ဂလိပ်လိုရေးတဲ့ ဗိုင်းနယ်လ် (Vinyl ဗီနိုင်း မဟုတ်) ကို မနေ့က တယောက်ကမေးလို့ အမှား ၂ ခုဖြေလိုက်တယ်။ အခုတနေရာမှာ ဓါတ်ပုံတွေ့တော့ အင်္ဂလိပ်လိုရခိုင်ရေးတာ မှားနေသေးတယ်။ အင်္ဂလိပ်သဒ္ဒါပါ စဉ်းစားရင် တခုလိုသေးတယ်။ နိုး ပေါလစ်တစ်လို့ရေးတာလည်းရတော့ရပါတယ်။ နိုင်ငံရေးအလိုမရှိဖြစ်မယ်။ နော့ ပေါလစ်တစ်ဆိုမှသာ နိုင်ငံရေးမဟုတ်ဖြစ်တယ်။
ကျွန်တော်တို့တတွေ အိန္ဒိယမှာ ဆန္ဒပြပွဲပေါင်းမြောက်မြားစွာလုပ်ခဲ့ကြတယ်။ ပလေကတ်တွေ ဘင်နာတွေမှာ အင်္ဂလိပ်တချို့ မြန်မာလိုတချို့ရေးကြရတယ်။ ဓါတ်ပုံသတင်းထောက်တွေက မှားရေးထားတာမျိုးကို မျက်စိကျတယ်။ ဆန္ဒပြပွဲမစခင် မှားရေးထားတာတွေ အရင်လိုက်စစ်ရတယ်။ အမှားကိုပြင်တော့ နောင်မှာ အမှားနည်းနည်းလာတယ်။
ဂေါတမဘုရားအလောင်းတော် သိဒ္ဓတ္တမင်းသားသည် ကပိလဝတ်ပြည်ကြီးဝယ် ထီးနန်းစည်းစိမ်ကို ခံစား၍နေရာ၊ အသက်တော် နှစ်ဆဲ့ကိုးနှစ်သို့ရောက်သောအခါ၊ သူအို၊ သူနာ၊ သူသေ၊ ရဟန်း၏အသွင် နိမိတ်ကြီးလေးပါးကိုမြင်သဖြင့်၊ သံဝေဂရ၍ ထီးနန်းစည်းစိမ်ကို စွန့်လွှတ်လျက်၊ ဖိုးတော် အဉ္စနမင်း မြို့ကြွင်း သက္ကရာဇ်မင်း ဖြိုကြွင်းသက္ကရာဇ် ၉၇ ခု ဝါဆိုလပြည့် တနင်္လာနေ့ သန်ကောင်ယံအချိန်တွင် ဆန္ဒအမတ်ကို နောက်လိုက်ခေါ်၍ ကဏ္ဍကမြင်းကိုစီးနင်းကာ တောထွက်တော်မူသည်။ တညအတွင်းမှာပင် ယူဇနာ သုံးဆယ်မျှ ခရီးကိုလွန်၍၊ ရှစ်ဥသဘမျှကျယ်သော အနောမာမြစ်ကို ကူးပြီးလျှင်၊ မြင်းတော်မှ ဆင်းသက်၍ ဝတ်ဆင်သောတန်ဆာနှင့် မြင်းတော်ကို ဆန္ဒအမတ်အားအပ်နှင်းကာ ကပိလဝတ် နေပြည်တော်သို့ ပြန်လွှတ်လိုက်၏။
ထို့နောက် လက်စွဲတော်သန်လျက်ဖြင့် ဆံတော်ကိုဖြတ်ပြီးလျှင် ငါသည် စင်စစ် ဘုရားဖြစ်မည်မှန်မူ ဆံတော်သည် မြေသို့မကျဘဲ၊ အထက်ကောင်းကင်၌ တည်စေသောဟုအဓိဋ္ဌာန်၍ ကောင်းကင်သို့ လွှင့်မြှောက်လတ်သော် တယူဇနာ မျှလောက်သောအရပ် လေထဲ၌ ပန်းဆွဲသကဲ့သို့တည်လေ၏။့့
မှတ်ချက် - တစ်ညအတွင်းမှာပင် မဟုတ်။ တစ်ယူဇနာမျှလောက်သောအရပ် မဟုတ်။
မြန်မာအတိုင်းအတာ Metric Imperial/US
ဆံခြည် 79.375 µm 3⅛ thou/mil
နှမ်း 0.79375 mm 31¼ thou/m
မုယော 4.7625 mm 3⁄16 in
လက်သစ် 1.905 cm ¾ in
မိုက် 15.24 cm6in
ထွာ 22.86 cm9in
တောင် 45.72 cm 1½ ft
ကောသ 1.28016 km 0.795455 mi
ဂါဝုတ် 5.12064km 3.18182 mi; about one league
ယူဇနာ 20.4826km 12.7273 mi
မုယောစပါး ၁ စေ့ = ၁ မုယော
၃ မိုက် = ၁ တောင်
၂ တောင် = ၁ ကိုက်
၂ဝ တာ = ၁ ဥသဘ
၂ဝ ဥသဘ = ၁ ကောသ
၄ ကောသ = ၁ ဂါဝုဒ်
၄ ဂါဝုဒ် = ၁ ယူဇနာ = (၆ တိုင် + ၄ဝဝ တာ)
၁ဝဝဝ တာ = ၁ တိုင်
၁။ ကျတော့်အမျိုးသမီး နို့ကြောပိတ်တာ မပျောက်သေးလို့ ဆရာ့ဆီ အကူအညီလှမ်းတောင်းတာပါ။ သြဂုတ် ၂၄ ရက်နေ့က စပြီး နို့ကြောပိတ် အဖျားဝင်တာပါ။ ၂၅ ရက်နေ့မှာ သုံးကြိမ်လောက် အရပ်ထဲက လူနဲ့ပဲ အနှိပ်ခံလိုက်ပါတယ်။ ညနေပိုင်းမှာ အဖျား ၁၀၀ ရှိပါတယ်။ အဲဒါနဲ့ ဆေးခန်းပြ ဆေးသောက်လိုက်ပါတယ်။ ၂၆ ရက်နေ့မှာလည်းတကြိမ် အနှိပ်ခံပြီး ညနေပိုင်းဆေးခန်းပြတဲ့အခါမှာ အဖျားက ၉၉.၄ ရှိပြီးတော့ အရောင်ကျဆေးထိုးပေးပြီး ဆေးသောက်ဖို့ ပေးလိုက်ပါတယ်။ ၂၇ ရက်နေ့မှာ အဖျားမရှိဘဲ ဆေးခန်းက အရောင်ကျဆေး ထိုးပေးလိုက်ပါတယ်။ ၂၈ ရက်နေ့ နေ့လည်မှာ အနှိပ်ခံလိုက်တဲ့အတွက် ညနေပိုင်း ပြန်ဖျားတာ အဖျားက ၉၉ ရှိပါတယ်။ အဲဒီနောက်ပိုင်း အနှိပ်မခံဘဲ တိုင်းရင်းဆေးဖြစ်တဲ့ နို့ကျိတ်ကြေဆေး နဲ့ ဆရာခိုဆိုတဲ့လိမ်းဆေး လိမ်းပြီးတော့ ဂေါ်ဖီရွက်အုပ်ပါတယ်။ OG နဲ့ပြတော့ ၂၉ ရက်နေ့ကစပြီးခုထိ OG ပေးလိုက်တဲ့ ဆေးတွေသောက်နေတယ်။ အဖျားမရှိပေမဲ့ နို့ကြိတ်က အရောင်မလျှော့ဘူး၊ ကလေးနို့စို့ပြီးရင် နို့ကျိတ်နေရာက ပျော့သွားတယ်။ နို့တွေတင်းလာရင် ဖျင်းဖျင်းဖြစ်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။ အဲဒါ အခုလက်ရှိ ဘာလုပ်ရမှန်းမသိဘူးဖြစ်နေတယ်ဆရာ။ ဆေးခန်းသွားပြဖို့ပဲ ကျနော်ကတော့ ပြောနေရတာ ခွဲရမှာ ကြောက်လို့တဲ့လေ။ ကျနော်က လက်ရောင်လိုက်တာလား ၊ ပြည်တည်တာလား မကွဲဘဲ ဖြစ်သွားမှာစိုးရိမ်လို့ ဆရာဆီ အကူအညီလှမ်းတောင်းတာပါ။ ကျနော့်အမျိုးသမီးသမီးက အသက် ၃၁ နှစ်ထဲမှာပါ။ ကလေးက ခြောက်လခွဲ။ ဖြည့်စွတ်စာ စကျွေးရင်းက ဖြစ်သွားတာ။ ဓာတ်ပုံပါ ပို့လိုက်တယ် ဆရာ။ ဖြစ်တာက ဘယ်ဖက်ခြမ်းပါ။ လေးစားလျက်။
၂။ ဆရာ သမီးအခု ကလေးမွေးထာတာ ၂၅ ရက်ရှိပြီ။ နို့တစ်ဖက်ခဲပြီး အရမ်းနာနေတာ ရေနွေးကပ်တာ ပိုနာနေသလိုပဲ။ ဘာဆေးသောက်ရပါမလဲ။ ကျေးဇူပြု၍ဖြေပေးပါ။
၃။ ဆရာရှင့် ကျွန်မနာမည်က မ့့ ပါ။့့ မြို့မှာနေပါတယ်။ မေးဖူးပါတယ်။ အခုကျွန်မသားလေးက ငါးလထဲမှာပါ။ ကန်တော့ပါဆရာ ကျွန်မရဲ့ညာဘက်နို့က တင်းပြီး နာနေလို့ပါ။ နို့လည်း သိပ်မထွက်ဘူးဆရာ။ အရင်ကဆို အဲလိုမဖြစ်ပါဘူး။ နို့ထိပ်နားမှာနဲနဲရောင်နေပါတယ်။ ဘယ်လိုလုပ်ရမလည်းဖြေပေးပါအုံးနော်။
၄။ ကျမက ရန်ကုန်ကပါ။ အသက် ၃၄ နှစ်ရှိပါပြီ။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ လက သားဦး မိန်းခလေးမွေးထားပါတယ်။ မွေးပြီး ၂ ပတ်လောက်ကစပြီး ခဏခဏနိ့တင်းပြီး နိ့ကြောင်းပိတ်ပါတယ်။ နိ့တင်းတာက ညှစ်ထုတ်ပစ်ရင် ကောင်းသွားပေမဲ့ နို့ကြောင်းပိတ်တာက ဘယ်လိုလုပ်မှ ပျောက်မှာလဲဆရာ။ အခုနောက်ပိုင်း ညအိပ်ရာဝင် အစာမစားလို့ နို့မတင်းတော့ပေမဲ့ နို့မှာ နို့ဆံခဲလား နိ့ဖတ်ခြောက်လား မသိပါ ပိတ်ပြီးနိ့တိုက်ရင် အရမ်းနာပါတယ်။ အနာသက်သာတဲ့ဆေး (သို့) အနာပျောက်အောင် ဘယ်ဆေးသောက်ရမလဲဆရာ။
၅။ ကလေးမိခင်နို့မှာ အနာဖြစ်နေလို့ပါ။ ကလေးက တလခွဲသားပါ။ အဲတာ ဘယ်လိုကုသလို့ ရနိုင်ပါသလဲ။ အမျိုးသမီးက အခုဆို ကလေးနို့တိုက်နေတာ ၆ လရှိပါပြီ။ နို့လည်းကောင်းကောင်းထွက်ပါတယ်။ ကလေးကလည်း နို့တော်တော်စို့ ပါတယ်။ မနေ့ ညကမှ ကလေးနို့စို့များတဲ့ နို့( ဘယ်ဘက် ) အောက်ခြေနားက တင်ပြီးနာနေတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ ဘာဖြစ်တာလည်းဆရာ။ အားလုံးကောင်းနေရာက ဘာလို့အဲ့လိုဖြစ်တာလည်း သိချင်ပါတယ်။ ပထမဆုံးကလေးမို့ မသိတာတွေများသလို စိုးရိမ်စိတ်တွေလည်းများနေလို့ပါဆရာ။
ပြည်တွင်းမှာ ဆရာဝန်လုပ်ခဲ့ရစဉ်က မြန်မာပြည်အလယ်ပိုင်းဒေသတွေမှာ ကလေးဖွါးပြီး သားဦးဆိုရင် နို့နာပေါက်တာ ၃ ယောက်မှာ ၁ ယောက်လောက် တွေ့တယ်။ ဒေလီမှာတော့ အတော်နည်းပါတယ်။ WHO ခန့်မှန်းချက်အရ နို့တိုက်မိခင် ၂့၆% ကနေ ၃၃% ရှိတယ်။ ၁ဝ ယောက် ၁ ယောက်လို့ ပြောနိုင်တယ်။ အမေရိကားမှာ ၅-၃၃% ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်။ နို့တိုက်သူထဲက ဝ့၎-ဝ့၅% သာ နို့ပြည်တည်နာဖြစ်ပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်တွေကို ရေချိုးတိုင်း နို့သီးထိပ်ကလေး ဆေးပေးဘို့မှာရတာ အဲဒါကြောင့်ဖြစ်တယ်။ နို့ထွက်ပြွန်လေးတွေရဲ့ ထိပ်ဝကို ချွေး၊ အဆီ၊ အညစ်အကြေး ပိတ်နေတာကနေ နို့နာဖြစ်လာတတ်တယ်။ ဖိအိပ်ရကနေ နို့သွားလမ်း ကျဉ်း-နှေး သွားတာ၊ ကလေးက နိုင်အောင်မစို့နိုင်တာ။ ထွက်ရ-တိုက်ရမဲ့နို့ အောင်းနေတာက အကြောင်းတွေဖြစ်တယ်။ (ဘရာစီယာ) အတွင်းခံကြောင့်လဲ ဖြစ်နိုင်တယ်။ တခါတလေတော့ ဘာလို့လဲ လက်ညှိုးထိုးမရဘူး။
နို့နာက ရောဂါကြီးမဟုတ်တဲ့အတွက် စိတ်သက်သာရာရပါ။ လူတော့ သိပ်မသက်သာဘူး။ Mastitis နို့ရောင်တာရော Breast abscess နို့ပြည်တည်နာပါ နှစ်မျိုးလုံးက နာတာတွေချည်းဘဲ။ ပြည်တည်ရင် ပိုနာတယ်။
နို့တဖက်ထဲဖြစ်တာ များတယ်။ ဖြစ်တဲ့နို့တင်းနေမယ်၊ ပူနေမယ်၊ မအီမသာနဲ့ နေမကောင်းဖြစ်မယ်၊ ဖြစ်တဲ့နို့နေရာမှာ ရောင်နေမယ်၊ ပူလောင်ပြီး နာနေတာက ဆက်တိုက်ဖြစ်မယ်၊ ကလေးနို့တိုက်ရင် ပိုသိသာမယ်၊ အနာအပေါ်က အရေပြား နီနေမယ်၊ ပုံစံက နို့သီးထိပ်ဘက်ကို ရှူးသွားတဲ့ တရိဂံပုံဖြစ်နေမယ်၊ ရောင်ပြီး ဖေါင်းစူနေမယ်၊ နို့နာနေရာက အရေပြားနဲ့ နီးရင် ပိုနာမယ်။ ဖေါင်းလာတာ စောစောသိမယ်။ နာပေမဲ့ ကံကောင်းတယ်အောက်မေ့ပါ။ အတွင်းထဲဖြစ်တာက နာတာကို နောက်ကျမှသိရလို့ အနာခေါင်း အကြီးကြီးဖြစ်နေလောက်ပြီ။ အဖျားမယ်၊ အပူချိန် ၁ဝ၁ ထက်ကျော်နိုင်တယ်၊ ကိုက်ခဲတာ၊ ချမ်းတုံတာ၊ စိုးရိမ်စိတ်ကဲပြီး၊ စိတ်မသက်မသာ ဖြစ်မယ်၊ အားယုတ်မယ်။
တိတိကျကျပြောရရင် နို့ရောင်တာအတော်များများက ရောဂါဖြစ်စေတဲ့ ပိုးကြောင့်မဟုတ်ပဲဖြစ်တယ်။ သန့်ရှင်းရေးလိုလို့လဲ မဟုတ်ဘူး။ S. aureus ပိုးကနေ အများဆုံးဖြစ်စေတယ်။ S. epidermidis နဲ့ Streptococci ပိုးတွေကလဲ ဖြစ်တယ်။ ကလေးနို့တိုက်တဲ့ကာလတွေမှာ ဖြစ်တာကို Puerperal Mastitis မီးတွင်းနို့နာလို့ ခေါ်ပြီး၊ နို့တိုက်ချိန်လဲမဟုတ် ဖြစ်ချင်တာကို Nonpuerperal Mastitis လို့ ခေါ်တယ်။ နို့တိုက်တဲ့ကာလလို့ ပြောတာ သိပ်တော့ မမှန်ပြန်ဘူး။ မီးဖွါးပြီးစကာလလို့ပြောမှ မှန်တယ်။ မွေးထားပြီး ကလေးကို နို့မတိုက်သူတွေမှာလဲ နို့နာ ဖြစ်သေးတယ်။ ယောက်ျားတွေမှာလဲ ဖြစ်ပါတယ်။
၁၉၈ဝ ကတည်းက နို့နာတွေကို ပိုးရှိတာနဲ့ မရှိတာလို့ ခွဲခြားခဲ့တယ်။ ခုနောက်ပိုင်း အဲလိုခွဲဘို့ မဖြစ်နိုင်တာ သိလာတယ်။ နို့ထဲမှာပါနေတဲ့ ရောဂါပိုးများတာနဲ့ ရောဂါဆိုးဝါးတာ ဆက်စပ်မှုမရှိတာ တွေ့လာရတယ်။ နို့ထဲမှာ ပိုးပါနေတိုင်း ရောဂါ မရစေပါ။ နို့လှူရသူတွေ ရှိတယ်။
နို့နာ ဟုတ်-မဟုတ် စမ်းသပ်တာနဲ့ သိတယ်။ ဒါပေမဲ့ လိုအပ်ရင် (အာလ်ထွာဆောင်း) ရိုက်မယ်။ ဆေးပေးနေပေမဲ့ မသက်သာသူတွေကို Mammograms နဲ့ Breast biopsies လုပ်မယ်။ နို့ကင်ဆာကို သံသယတော့ ရှိရပေမဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်နဲ့ နို့တိုက်နေသူတွေမှာ မဖြစ်တတ်ပါ။ နို့နာ ထပ်ဖြစ်နေသူအနေနဲ့လဲ ကင်ဆာကို ထူးပြီး စိုးရိမ်စရာ မလိုပါ။ Fibrocystic disease ဆိုတဲ့ နို့နာတမျိုးကို အရင်က Chronic cystic mastitis နာတာရှည်-နို့နာလို့ ခေါ်ခဲ့ဘူးတဲ့ Inflammatory breast cancer ကင်ဆာအမျိုးအစားက နို့နာနဲ့ အတော်ဆင်လို့ အသေအခြာ ခွဲဘို့လိုမယ်။
ရေနွေးဝတ်၊ ရေနွေးပုလင်းတင်ပေးပါ။ တခါလုပ်ရင် ၂ဝ-၃ဝ မိနစ်၊ ၄ နာရီတခါလုပ်ပါ။ အပူကပ်ပေးနိုင်တယ်။ ကလေးကို နို့ဆက်တိုက်ပါ။ လိုသေးရင်ညှစ်ပြစ်ပါ။ မိခင်ရဲ့ အရေပြားမှာရှိတဲ့ပိုး၊ ကလေးပါးစပ်ထဲရှိတဲ့ ပိုးတွေကနေ နို့ပြွန်ထဲ ဝင်လာကနေလဲ ဖြစ်စေနိုင်တယ်။ Staphylococcus aureus ပိုးကနေ အဲလိုဖြစ်တာ များတယ်။ နို့အပေါ်ယံ အရေပြားကို ရေ + ဆပ်ပြာနဲ့ တနေ့ ၂ ခါ သန့်ရှင်းပါ။ ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်း ပွတ်တိုက်တာ မလုပ်ပါနဲ့။ နို့ကိုညှစ်ပေးပါ၊ ကလေးကို နို့တိုက်ပေးရတယ်။ မရသေးရင် Brest pump နို့စုပ်ကရိယာနဲ့ နို့ရည် ထုတ်ပေးရတယ်။ တောမှာဆိုရင် သင်္ဘောရိုးနဲ့ စုပ်ကြတယ်။ နို့ပြည်တည်တာဖြစ်လာရင်တော့ အနာကို မညှစ်ပါနဲ့။ ခံလည်းမခံနိုင်ပါ။
အနာ-အရောင်ကျဆေး Ibuprofen, Ketoprofen နဲ့ Naproxen တွေပေးမယ်။ နာလွန်းရင် ဘိန်းသဘောပါတဲ့ အနာ သက်သာဆေးတွေ ပေးတယ်။ Ibuprofen 200 mg တခါသောက် ၁ ပြား၊ တနေ့ ၂-၃ ကြိမ်သောက်နိုင်တယ်။ ဘယ်နှစ်ရက်ရယ်မရှိပါ။
အနာဖြစ်မယ်ထင်ရင်တော့ သုံးလေ့ရှိတဲ့ ပဋိဇီဝဆေးပေးရတယ်။ ဒါပေမယ် Staphylococcus aureus ပိုးက ဆေးတွေကို ယဉ်နေတယ်။ Flucloxacillin 500mg တနေ့ ၂ ကြိမ်၊ Dicloxacillin 250 – 500 mg တနေ့ ၄ ကြိမ်၊ တွေကို သုံးနိုင်တယ်။ Cefazolin, Cephalothin, Cephalexin, Clindamycin, Lincomycin နဲ့ Erythromycin တွေကိုလည်း သိပ်မပြင်းတာအတွက်ပေးတယ်။
နောက်ဆက်တွဲ ဖြစ်နိုင်တာတွေကတော့ နို့နာပြန်ဖြစ်တာနဲ့ နို့နာကနေ နို့ပြည်တည်တာဖြစ်မယ်။ ပြည်ဆိုတာ ဦးနှောက်ထဲ၊ အသဲထဲ၊ နို့ထဲ၊ ဘယ်ထဲရှိရှိ ထုတ်ပြစ်မှ ပျောက်တယ်။ စုပ်ထုတ်တယ်။ ခွဲထုတ်တယ်။ ခွဲတာက ပိုကောင်းတယ်။
နို့အုံမှာ ပြည်တည်တာမျိုးက တင်ပါးမှာဖြစ်တဲ့ ဆေးထိုးနာလိုဘဲ အနာခေါင်း အကျယ်ကြီးဖြစ်လို့ ခွဲရင် မေ့ဆေးနဲ့ အဝကျယ်ကျယ် ခွဲရတယ်။ မကြောက်တတ်သူတွေကို ပြောရရင် ဆရာဝန် လက်ညှိုးတချောင်း ဝင်နိုင်အောင်အထိ ကျယ်မှကောင်းတယ်။ မဟုတ်လို့ သေးသေးလေးခွဲပေးရင် အပေါ်အရေပြားက ကျဉ်းပိတ်လာချိန်မှာ အထဲက ထွက်စရာ ပြည်နဲ့ မန်းရည်မကုန်သေးရင် ထပ်ခွဲရတယ်။ Sinus တလမ်းသွားအနာ ဖြစ်လာတတ်တယ်။ အမာရွတ် ပိုကြီးပြီး နောက်ကိုယ်ဝန်မှာ နို့သေးသွားနိုင်တယ်။ အနာမှန်သမျှ အောက်ဆုံးကနေစပြီး အနာကျက်စေရတယ်။
အစာအိမ်ကထုတ်တဲ့ အက်စစ်အထွက်နည်းခြင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့ လက္ခဏာက အက်စစ်အထွက်များခြင်းကြောင့် ဖြစ်တဲ့လက္ခဏာနဲ့ တူလားသိချင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်က အက်စစ်အထွက်များလို့ထင်ပြီး Omeprazole မနက်တလုံး ညတလုံး သောက်ပါတယ်။ လက္ခဏာက ပိုပိုဆိုးလာသလိုပါပဲ။ အက်စစ် အထွက်နည်းနေရင်ရော ကုလို့ရပါသလား။ သောက်ဆေးတွေက ဘာတွေသောက်လို့ရပါလဲ။ တပတ်လောက် စမ်းသောက်ကြည့်လို့ ရပါသလား။ အမည် (့)၊ အသက် ၂ဝ၊ နေရပ်-ရန်ကုန်။
များလဲမကောင်း၊ နည်းလဲ မကောင်းတာထဲမှာ အစာခြေရည်လဲပါတယ်။ များတာကိုတော့ လူသိများတယ်။ မေးတဲ့သူ ကျေးဇူးတင်ဘို့ကောင်းပါတယ်။ အက်စစ်ဓါတ်များလို့ အစာအိမ်လေနာဖြစ်တာရှိသလို နည်းလို့လဲ ရောဂါရစေနိုင်တယ်။ (အက်စစ်) နည်းတဲ့ရောဂါနဲ့ Achlorhydria (အက်စစ်) မရှိတဲ့ရောဂါဆိုတာတွေ ရှိတယ်။ လူ့အစာအိမ်ထဲက အစာခြေအရည်ကို အစာခြေ-အက်စစ် လို့လဲခေါ်တယ်။ ဓါတုဗေဒမှာ (အက်စစ်) ဓါတ်ကို (ပီအိတ်ခ်ျ) နဲ့ တိုင်းရလို့ သူ့မှာ pH 1.5 ကနေ 3.5 အထိရှိတယ်။ acid (ဟိုက်ဒရိုကလောရစ်-အက်စစ်) အပြင် (ပိုတက်ဆီယမ်-ကလိုရိုက်) နဲ့ (ဆိုဒီယမ်-ကလိုရိုက်) တွေလဲပါတယ်။ စားလိုက်တဲ့အထဲက (ပရိုတင်း) ကို အဓိက ချက်လုပ်ပေးတယ်။
အစာခြေအရည်ကို အစာအိမ်အတွင်းနံရံက (ဆဲလ်) လေးတွေကနေ စစ်ထုတ်ပေးနေတယ်။ တခြား (ဆဲလ်) တွေကနေ (ဘိုင်ကာဗွန်နိတ်) ကိုပါ ထုတ်ပေးနေလို့ (အက်စစ်) ဓါတ်ကို လိုတာထက် ပိုမသွားအောင် ဓါတ်ပျယ်မှု ဖြစ်စေတယ်။ အချွဲရည်လဲထုတ်ပေးသေးတယ်။ (ဘိုင်ကာဗွန်နိတ်) ကို အူသိမ်အစပိုင်း အကွေးနေရာကလဲ ထုတ်ပေးနေတယ်။ ဒါကြောင့် အစာခြေအရည်က အဲဒီနေရာမှာ (ပီအိတ်ခ်ျ) 4.5 ကနေ 5.0 အထိ ရောက်သွားစေမယ်။
အစာအိမ်က စစ်ထုတ်ရည်ကို (အော်တိုနောမစ်) အာရုံကြောစနစ် နဲ့ ဟော်မုန်းတွေကနေ ထိန်းပေးနေတယ်။ (ဗေးဂတ်စ်) အာရုံကြော နဲ့ (ဂက်စထရင်) တို့က အရေးပါတယ်။
အစာအိမ်မှာ အက်စစ်ဓါတ် နည်းနေတာဟာ GERD အစာအိမ်-အစာမြိုပြွန်-အထက်ဆန်ရောဂါ ဖြစ်နေသလို ခံစားရမယ်။ စာတပုဒ်ရေးထားပါတယ်။ စားသမျှ (ပရိုတင်း) တွေကို မချက်နိုင်တော့ဘူး။ (ဗက်တီးရီးယား) တွေ ပိုများနေမယ်။ ဝမ်းပျက်မယ်။ အစာတွေ ဗီတာမင်တွေကို ကောင်းကောင်း စုပ်မယူနိုင်လို့ အားနည်းလာမယ်။ ရောဂါပိုး ဝင်လွယ်မယ်။ ပင်လယ်စာစားရင် သိသာမယ်။ (မက်ဂနီဆီယမ်) ဓါတ်၊ Zinc သွပ်ဓါတ်နည်းမယ်။ (ဗီတာမင်) စီ-ကေ-ဘီအုပ်စုတွေ နည်းမယ်။ ဗိုက်နာမယ်။
• Antacids လေဆေးတွေ သောက်ရင်လဲ ဖြစ်နိုင်တယ်။ Acid Gone, Alamag, Alenic Alka, Alka-Mints, Alternagel, Alu-Cap, Aluminum Hydroxide, Aluminum-magnesium hydroxide sulfate, Alu-Tab, Ami-Lac, Amitone, Amphojel, Amphojel, Basaljel, Calcarb, Calci Mix, Calci-Chew, Calcium acetate, Calcium carbonate, Calcium Concentrate, Calcium Liquid Softgel, Calcium Oyster Shell, Cal-Gest, Caltrate, Chooz, Citra pH, Dialume, Di-Gel, Dulcolax, Milk of Magnesia, Extra Strength Mylanta Calci Tabs, Gaviscon, Gelusil, Genaton, Heartburn Antacid Extra Strength, Icar Prenatal Chewable Calcium, Isopan, Maalox, Magaldrate, Magnesium Hydroxide, Magnesium Oxide, Masanti Supreme, Milk of Magnesia, Mintox Plus, Mylanta, Nephro Calci, Neut, Os-Cal 500, Oysco 500, Oyster Calcium, Oyster Shell, Ri-Mag, Riopan, Rolaids, Ron Acid, Sodium Bicarbonate, Sodium Citrate, Tempo, Titralac, Tums Kids, Tums Plus, Uro-Mag စတဲ့ နာမည်တွေနဲ့ ရှိတယ်။
• H2-receptor antagonists (H2 Blockers) ဆေးတွေ သောက်ရင်လဲ ဖြစ်နိုင်တယ်။ ဥပမာ Tagamet (Cimetidine), Pepcid (Famotidine), Axid (Nizatidine) နဲ့ Zantac (Ranitidine) တွေဖြစ်တယ်။
• Proton pump inhibitors ဆေးတွေ သောက်ရင်လဲ ဖြစ်စေနိုင်တယ်။ Omeprazole ဆေးက အဲဒီအမျိုးအစား ဖြစ်ပါတယ်။
• Helicobacter pylori ပိုးဝင်တာကလဲ ဖြစ်စေနိုင်တယ်။
• Pernicious anemia သွေးအားနည်းရောဂါ၊ Atrophic gastritis အစာအိမ်ရောဂါတမျိုး နဲ့ အစာအိမ်-ကင်ဆာ ရောဂါတွေကနေလဲ ရစေနိုင်တယ်။
• အစာအိမ်ကို ဓါတ်ကင်ရလို့လဲဖြစ်နိုင်တယ်။
• Gastric Bypass အစာအိမ်ခွဲစိတ်မှုကလဲ ဖြစ်နိုင်တယ်။
• (နိုင်ယာစင်) ဓါတ်နည်းလို့လဲ ဖြစ်လာနိုင်တယ်။
• လည်ပင်းကြီးဟော်မုန်း နည်းတဲ့ရောဂါဖြစ်ရင် Basal metabolic rate အခြေခံ ဇီဝကိစ္စ-လိုအပ်ချက် ကျတာကနေ ဆက်ဖြစ်နိုင်တယ်။
• (အော်တိုအင်မြူးန်) ရောဂါကနေလဲ ဖြစ်မယ်။
ရောဂါကိုစစ်ရင် Achlorhydria ရှိနေသူတွေထဲက ၉ဝ% မှာ H+/K+ ATP-ase proton pump (အင်တီဘော်ဒီ) စမ်းတွေ့တယ်။ Gastric pH က (>4.0) များနေမယ်။ Gastrin levels (ဂက်စ်ထရင်န်) လဲ များနေမယ်။
Symptoms of Hypochlorhydria ရောဂါရှိနေရင် ဘာလက္ခဏာတွေပြမလဲ
• Irritable bowel syndrome ဖြစ်မယ်။ လေတက်-လေပွ-အနေရခက်မယ်။
• (အလာဂျီ) ပိုရစေတတ်တယ်။
• Gastro-esophageal reflux disease (GERD) အစာခြေရည် အထက်တက်ရောဂါဖြစ်နိုင်တယ်။
• သံဓါတ်နည်း သွေးအားနည်းရောဂါ၊
• ဘီ-၁၂ နည်းရောဂါ၊
• Malabsorption အစာမချက်နိုင်တာကနေ ကြာရင် Accelerated ageing လူက ပိုအိုစာလာမယ်။
• Candida dysbiosis မှိုရောဂါ နဲ့ Bacterial dysbiosis ဗက်တီးရီးယားဝင်တာ။
1. အစာ (ပရိုတင်း) ကို ကောင်းကောင်း မကျချက်နိုင်ဖြစ်မယ်။ အက်စစ် ပျယ်ဆေး၊ H2 blockers ဆေး နဲ့ Protein pump inhibitors ဆေးတွေကနေဖြစ်ရတာဆိုရင် Osteoporosis အရိုးရောဂါ ဖြစ်လာစေနိုင်တယ်။
2. လူ့ကိုယ်ခန္ဓာမှာ လိုအပ်လှတဲ့ ဓါတ်ပစ္စည်းလေးတွေကို စုပ်ယူတာ မလုပ်နိုင်ဖြစ်မယ်။ ကင်ဆာ၊ နှလုံးရောဂါ နဲ့ အာရုံကြောရောဂါတွေ သူများထက် ပိုရလာစေနိုင်တယ်။ Trace element ဓါတ်ပစ္စည်းလေးတွေ ဆိုတာ 100 micrograms per gram ထက်နည်းတာကိုခေါ်တယ်။ အရိုးအတွက်လိုအပ်တဲ့ (ဘိုရွန်)၊ လူပိုဝမှာနဲ့ ဆီးချိုကာကွယ်ဘို့လိုအပ်တဲ့ (ခရိုမီယမ်)၊ ဗီတာမင် ဘီ ၁၂ အတွက်လိုအပ်တဲ့ (ကိုဘော့)၊ (ကောပါး)၊ Fluorine (ဖလိုရင်း)၊ (ဂျာမေးနီးယမ်)၊ (အိုင်အိုဒင်း)၊ သံဓါတ်၊ (မင်ဂနီးစ်)၊ (မော်လီဘဒီနမ်)၊ (ဆဲလယ်နီယမ်)၊ (စီလီကွန်)၊ (ဗနေဒီယမ်) နဲ့ သွပ်ဓါတ်တွေပါတယ်။
3. အစာအိမ်ထဲမှာ ပိုးတွေကို သန့်မပြစ်နိုင်ဖြစ်မယ်။ (GE) အစာအိမ်ရောင်ရောဂါ ရစေနိုင်တယ်။ ဝမ်းပျက်တာဖြစ်မယ်။ အစာဆိပ် သင့်နိုင်တယ်။ အစာခြေအရည်က မလိုလားအပ်တဲ့ (ဗက်တီးရီးယား) နဲ့ (ရိစ်) တွေကို ရှင်းပေးနိုင်တယ်။ ဒါတွေက လိုတာထက် များနေရင် အစာကို ချက်လုပ်ရမဲ့အစား (ကစော်) ဖေါက်သလို ဖြစ်လာစေမယ်။ လေထမယ်၊ လေပွမယ်။ လေတက်မယ်။
4. အစာအိမ်-ကင်ဆာဖြစ်နိုင်ခြေကို များစေနိုင်တယ်။
5. ဗီတာမင် ဘီ ၁၂ ဓါတ်ကို စုပ်ယူတာအားနည်းစေမယ်။
ကုသတာမှာ ဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းခံအရ လုပ်ပေးရတယ်။ ဥပမာ လေဆေးတွေကြောင့်ဆိုရင် မသောက်ဘဲနေပါ။ တခြားနည်းကို ဆရာဝန်မေးပါ။ Betaine HCL ကို အစာစားချိန်မှာ ပေးတာများတယ်။ Pepsin ခေါ်တဲ့ အစာခြေ (အင်ဇိုင်း) ပါတဲ့ ဆေးမျိုးဖြစ်တယ်။ နည်းနေတာတွေကိုလဲ ဖြည့်ပေးရတယ်။ ဓါတ်ဆားတွေနဲ့ (ဗီတာမင်) တွေ ဥပမာ ဗိတာမင် B12 ပါမယ်။ တချို့အတွက် အစာအိမ်အားနည်းနေလို့ ဆက်ဖြစ်လာနိုင်တာတွေရှိနေရင် မှိုဆေး၊ (ပရိုဘိုင်အောတစ်) ဆေး နဲ့ ပဋိဇီဝဆေးတွေပါ လိုနိုင်တယ်။ (အက်စစ်) အစားထိုးဆေး ရက်တိုသောက်ရမယ်။ Cider vinegar ကိုသုံးတာ များတယ်။ (ဗနီဂါ) ဆိုတာ (အင်စစ်တစ်-အက်စစ်) ပါတာကိုခေါ်တယ်။ ကြာကြာသောက်တာ မကောင်းပါ။ ဗီတာမင် (စီ) ကို အစာစားပြီးသောက်ပါ။ Betaine Hydrochloride စားသုံးသင့်တယ်။ ခရမ်းရောင်မုံလာဥမှာပါတဲ့ဓါတ်ဖြစ်တယ်။ ဆေးအနေနဲ့လဲ ထုတ်တယ်။
လက်ဖက်ရည်ဆိုင် ထိုင်ဖြစ်တယ်။ ပူလောင်ကြမ်းတမ်းတဲ့ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးကို ပူရီစားပြီး ရေနွေးကြမ်းသောက်တယ်။
မနေ့တနေ့ကထွက်တဲ့သတင်းနောက်မှာ နှစ်ပေါင်းလေးငါးဆယ်နောက်ခံသမိုင်းရှိတာမို့ သွားရည်စာတခါစားလောက်နဲ့မရ။ ဒီဆိုင်မှာစားရင် ဒီဆိုင်ကရောင်းတာသာစားလို့ရတယ်။
ကျွန်တော့်မှာ ကြွားစရာရှိတယ်။ နိုင်ငံစုံက အစားစုံစားဖူးတယ်။ မြန်မာပြည်ကဆိုင်တွေမှာလည်း စားခဲ့ဖူးပါတယ်။ ကောင်းတာတွေလည်းသိ။ တခါသွားပြီး နောက်တခေါက် မသွားတော့တဲ့ဆိုင်လည်းသိတယ်။ ဆိုင်ရွေးစရာမရှိလို့ မှိတ်ကြိတ်စားခဲ့ရတဲ့ဆိုင်မျိုးနဲ့လည်းကြုံခဲ့တယ်။ စားစရာတွေထဲမှာ ဆေးခပ်ထားတာတွေလည်းသိတယ်။ တချို့လည်း ပြန်ကြော်ဆီကိုပဲ စွဲနေကြတယ်။
မြန်မာပြည်သူတွေ တနပ်စားတွေဘေးကဝေးကြပြီးသကာလ အော်ဂဲနစ်စစ်စစ် စားသောက်နိုင်ကြပါစေသတည်း။
၁။ ဆရာ အလျင်နဲ့ အရင် မေးချင်လို့ပါ။ မနေ့က မှတ်စုရေးရင်း အရင်သွားနှင့်နဲ့ အလျင်သွားနှင့်သည်ကို ဇဝေဇဝါ ဖြစ်သွားလို့ပါ တချို့ ဝတ္ထုတွေမှာ အလျင်လို့ ရေးတာ ဖတ်မိလို့ပါ။
၂။ အရင်လိုတာလား၊ အလျင်လိုတာလားဆရာ။
စကားအရာမှာတော့ အရင် (ယခင်) ကိုသုံးကြတယ်။ အရင်တုန်းက၊ ဟိုအရင်က၊ ဥပမာ ကိုအံ့ကြီးဆိုတဲ့ အရင့့် ဟိုနှစ်တုန်းကပေါ့ဗျာ အောင်ပွဲတွင့့်
Back pain fromaspinal block ခါးထုံဆေးနှင့် ခါးနာနေခြင်း
ဆရာရှင့် သမီးကကလေးမွေးတော့ဗိုက်ခွဲမွေးရပါတယ်ရှင့်။ အဲ့ဒါထုံဆေးထိုးတော့ ခါးကနာပါတယ်ရှင့်။ ခုမှခုနှစ်လပဲ ရှိတော့ရှိပါသေးတယ်။ ဒါပေမဲ့ထုံဆေးကြောင့်လား ဗိုက်ခွဲထားရလို့လား ဘာကြောင့်မှန်းတော့မသိပါဘူး။ များသေားအားဖြင့် မေးလိုက်ရင်လဲနာကြတယ်ပဲပြောပြကြပါတယ်။ ရှေ့စီနီယာမေမေတွေက အလကားမေနေရင်းကို နာနေတာပါ။ အဲ့ခါးရိုးကျောရိုးကြီးကပါ။ နောက်ဂုတ်ထိထိုးထိုးလာတက်ပါတယ်။ အဲ့ဒီဝေဒနာက မပျောက်တတ်ပဲ ကျန်ခဲ့မှာလားဆရာရှင့်။ ဒါမှမဟုတ်အရိုးအကျောဆရာဝန်များနဲ့ကုသရမှာပါလားရှင့်။ ဘာမှ မသိပ်မလုပ်ရသေးဘဲနဲ့ကို ပင်ပန်းညောင်းညာနာကျင်နေတတ်ပါတယ်။ ခြေထောက်တွေလဲလေးပါတယ်ဆရာရှင့်။
မပျောက်တက် နှစ်ခါရေးထားတာကို မပျောက်တတ်လို့ပြင်ပါတယ်။ မေးတဲ့သူတွေ အတော်များပါတယ်။ ခါးနာခြင်းစာကိုသာ ပို့ပေးတယ်။ အခု စာအသစ်ရေးပါမယ်။
ခါးထုံဆေးထိုးပြီးနောက် ခါးနာနေတာ အများအားဖြင့် ခွဲပြီးစ ၂-၆ နာရီအတွင်းမျာသာဖြစ်တယ်။ ထုံဆေး ပျယ်သွားချိန်မှာဖြစ်တယ်။ တကယ်လို့ ခွဲပြီးနောက် ၃-၅ ရက်မှာစနာရင်တော့ အဲတာနဲ့မတူပါ။
ခါးထုံဆေးထိုးရင် တချို့ ယားမယ်။ ခွဲခန်းကထွက်လာပြီး ဆီးမသွားနိုင်ဖြစ်တတ်တယ်။ ဆီးပိုက်ထည့်ထားပေးရတယ်။ တချို့ ပျို့အန်တယ်။ တချို့မှာ ခေါင်းကိုက်တယ်။ တချို့အသက်ရှူရတာခက်တယ်။ အားလုံးက မဆိုးတာတွေသာ ဖြစ်တယ်။
ဖျားတာ၊ ဆေးထိုးတဲ့နေရာကနေ အရည်စိမ့်ထွက်တာ၊ အောက်ပိုင်းကြွက်သားတွေ အားနည်းနေတာ၊ ဆီး-ဝမ်း သွားရခက်တာတွေက နောက်ဆက်တွဲဖြစ်တာတွေဖြစ်နိုင်တယ်။ အထူးကုသမှုခံယူရမယ်။
ခါးနာတာက ဆေးထိုးအပ်ဝင်တဲ့နေရာမှာနာနိုင်တယ်။ တင်ပါးနဲ့ ပေါင် ခြေထောက်အထိနာနိုင်တယ်။ နာပုံနာနည်းက ထုံပြင်းပြင်းနာတယ်။ နည်းနည်းကနေ အသင့်အတင့်နာတယ်။ ဆေးထိုးတဲ့နေရာ အထက်မှာ နာရင် ဒါနဲ့မဆိုင်။
အပူတလှည့် အအေးတလှည့် ကပ်ပေးနိုင်တယ်။ Paracetamol, Ibuprofen အနာသက်သာဆေးသောက်နိုင်တယ်။
ပါရာစီတမောမှာ ပိုးပါနေတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းအတု
Bo Khaing URGENT WARNING! Be careful not to take the paracetamol that comes written P-500.
It's new, very white and shiny paracetamol. Doctors prove to contain ''Machupo'' virus, considered one of the most dangerous viruses in the world with high mortality rate....See More
အပေါင်းအသင်းတို့ ဒီသတင်းကို အမြန်ဆုံး ရှယ်ပေးကြပါဦး။ ဖော်ပြပါတံဆိပ်နှင့် ပါရာစီတီမောကို မသုံးမိကြစေရန် အလေးအနက်သတိပေးလိုက်ပါသည်။ ဤဆေးတွင် အသက်အန္တရာယ် ဖြစ်စေနိုင်သည့် Machupo အမည်ရှိ ဗိုင်းရပ်(စ်)တစ်မျိုး ပါဝင်နေပါ၍ အထူးရှောင်ရှားရန်နှင့် ဤဖော်ပြပါ သတင်းကိုလည်း အမြန်ဆုံး ရှယ်ပေးကြပါရန် လေးနက်စွာ တိုက်တွန်းအပ်ပါသည်။
နောက်တခါ လာပြန်ပြီဟေ့ လို့ပြောပါရစေ။ အရင်ကလည်း ရေးထားပါတယ်။ ဒီဆေးမှာ ပိုးပါတယ်ဆိုတာ ဟုတ်ပါသလားဆရာ။ ဒီဆေးအကြောင်း အများသိအောင် ရှင်းပြပေးပါဦးဆရာ။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရောင်းချနေသောဆေးဟု ပြောပါသည်။ ဆရာ ကျန်းမာပါစေ။
ပါရာစီတမော ၅ဝဝ အားထဲမှာ ပိုးပါနေတယ်လို့ရေးတဲ့စာဟာ အတုသာဖြစ်ပါတယ်။ တမင်တကာ လူတွေကို ကြောက်အောင် ခြောက်လှန့်စာသာဖြစ်တယ်။
HOAX – Machupo Virus In Paracetamol
By Brett M. Christensen On February 1, 2017In HoaxesTagged hoax, Machupo virus, paracetamol
Outline: “Urgent” message circulating via social media claims thatanew “very white and shiny” type of paracetamol tablets labelled P/500 contains the dangerous Machupo virus.
Brief Analysis: The claims in the warning are utter nonsense. There are no credible reports that support the claim that the Machupo virus has been found in paracetamol or any other medication. Machupo is spread primarily via aerosol transmission of dust particles from infected rodents. Sharing this false warning will help nobody.
သုံးသပ်ချက်အကျဉ်း = အဲတာ လုံးဝက အဓိပ္ပါယ်မရှိတဲ့ ပြောဆိုချက်သာဖြစ်တယ်။ ဆေးထဲမှာ Machupo ဗိုင်းရပ်စ် ပါတယ်တဲ့ ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ အစီရင်ခံချက် မရှိပါ။ Machupo ဗိုင်းရပ်စ်ဆိုတာ လေထဲနေသာကူးစက်တယ်။ နှာခေါင်းကနေသာဝင်တယ်။ ရောဂါပိုးရှိတဲ့ ကြွက်တွေကလာတဲ့ အမှုံအမွှားထဲမှာပါနေနိုင်တယ်။
ဒီလို ဟောက်စ်သတင်းကို ရှယ်လုပ်ခြင်းဟာ ဘယ်သူ့ကိုမှ အကျိုးမများစေပါ။ ကျွန်တော်တို့လူမျိုးက မူးယစ်ဆေးဆို ကောင်းကျိုးကို ရေးစေချင်။ သတင်းလိမ်သတင်းမှား ရှယ်သလားမမေးနဲ့။
၁။ ဆရာ ကျွန်မမောင်လေးက အသက်၂၈ နှစ်ပါ။ အသက်၂၀ ဝန်းကျင်ကတည်းက ခါးနာဖူးပါတယ်။ ခုတလော ပိုဆိုးလာလို့ ဆေးခန်းပြကြည့်တာ ကျောရိုးခိုင်ရောဂါ Ankylosing Spondylitis ရှိတယ်ပြောပါတယ်။ အဲဒီရောဂါအတွက် ဆောင်ရန် ရှောင်ရန်လေးတွေပြောပြပေးပါရှင့်။ အခုတလော ကျောတပြင်လုံး နာနာနေပါတယ်။
၂။ ဒေါက်တာခင်များ Ankylosing Spondylitis အကြောင်းသေချာလေးသိချင်လို့ပါ။ ကုသလို့ပျောက်မပျောက်၊ ဘယ်လို ကာကွယ်ရမယ်၊ သက်သာအောင် ဘယ်လိုလုပ်ရမယ် စသဖြင့် အစုံအလင် သိချင်ပါတယ်ခင်များ။ အဆင်ပြေရင် ဖြေကြားပေးပါ။
၃။ ဆရာ အချိန်ရရင် Ankylosing Spondylitis အကြောင်း ဆောင်ရန်ရှေားင်ရန်နှင့်ဘယ်လိုကုသလို့ရပါသလဲ သိချင်လို့ပါ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
ပဌမမေးခွန်းထဲက တစ်နှစ်လုံးကိုပြင်ပါတယ်။ ဆောရီး။ နောက်မေးခွန်း ၂ ခုလုံးမှာ ဖြစ်တဲ့သူ ကျား-မ-အသက် မသိပါ။ ဘာတွေခံစားနေရ မသိပါ။ ဆေးစစ်တာတွေ မသိပါ။
ခါးရိုးတွေ ရောထွေးသွာတဲ့ရောဂါဖြစ်ပါတယ်။ အဲလိုဖြစ်လာရင် ခါးရိုးမကြီးဟာ ပုံမှန်လိုလှုပ်ရှားလို့မရတော့ပါ။ လူအနေထားကိုက ပြောင်းလာမယ်။ hunched-forward posture ခေါ်တယ်။ ခါးကုန်းကြီးခေါ်တာမျိုးနဲ့ ပြောင်းပြန်။ အသက်ရှူရတာလဲ ခက်ခဲလာနိုင်တယ်။
ယောက်ျားတွေမှာပိုဖြစ်တယ်။ ကိုယ်ရဲ့တခြားနေရာတွေကိုထိခိုက်လာနိုင်တယ်။ ပျောက်အောင်လုပ်လို့ မရသေးပါ။ ဖြစ်နေသူတွေ စိတ်တော့မပျက်စေချင်ပါ။ ဆေးကုသမှုခံယူနေရင် ခံစားနေရတာတွေ အများကြီး သက်သာပါမယ်။ ခံစားရမှာတွေက နာမယ်။ တင်းကြပ်နေမယ်။ ခါးအောက်ပိုင်းနဲ့ တင်ပါး။ မနက်ထနဲ့ မလှုပ်မရှားနေတာ ကြာအပြီးမှာ ဆိုးတယ်။ ဆိုးလိုက် သက်သာလိုက်ဖြစ်မယ်။ ကြာတော့ ပိုဆိုးတယ်။
နောက်ဆက်တွဲဖြစ်နိုင်တာတွေရှိတယ်။ ဖြစ်တာကြာလာရင် အနာကျက်ဖြစ်စဉ်အရ အရိုးသစ်လေးတွေ ဖြစ်တာတယ်။ သူတို့ကနေ တံတားကူးပေးသလိုဖြစ်လာတယ်။ အဲတာတွေက ခါးရိုးဆစ်တခုနဲ့တခု ပေါင်းစပ်သွားစေမယ်။ တင်းမာနေမယ်။ အကွေးအဆန့်လုပ်မရဖြစ်လာမယ်။ ဆက်စပ်နေတဲ့ ရင်ခေါင်းပိုင်း နံရိုးအိမ်ကိုပါသက်ရောက်မယ်။ Uveitis မျက်စိနာမယ်။ နာတာခံစားရမယ်။ ကြည့်မကောင်းဘူး။ အလင်းရောင် မခံနိုင်ဘူး။ ဖိအားကြောင့်အရိုးကျိုးတာ ဖြစ်လာနိုင်တယ်။ အစောပိုင်းမှာ အရိုးကပါးနေရာကနေ ဆက်ဖြစ်တာ ဖြစ်တယ်။ နှလုံးကိုသက်ရောက်လာနိုင်တယ်။ သွေးလွှတ်ကြောမကြီးကိုသက်ရောက်မယ်။
ဆေးကုပေးရတာရဲ့ ရည်မှန်းချက်ကတော့ နာတာနဲ့ တင်းကြပ်နေတာသက်သာဘို့ဖြစ်တယ်။ အနာသက်သာဆေး အမျိုးအစားတွေဖြစ်တဲ့ naproxen (Naprosyn) နဲ့ indomethacin (Indocin) ပေးတယ်။ မရသေးသူတွေကို tumor necrosis factor (TNF) blockers ထိုးဆေးပေးမယ်။ Adalimumab (Humira), Etanercept (Enbrel), Golimumab (Simponi) နဲ့ Infliximab (Remicade) တွေဖြစ်တယ်။ ဘေးထွက် ဆိုးကျိုးတွေသတိထားရမယ်။ ဥပမာ ငုပ်နေတဲ့ တီဘီ ပေါ်လာမယ်။
Physical therapy ဖီဇစ်ကယ်သာရာပီလည်း လုပ်နိုင်တယ်။ လိုအပ်ရင်ခွဲစိတ်ကုသပေးမယ်။ ဆေးလိပ်မသောက်ပါနဲ့လို့ ဆရာဝန်ကတားမယ်။
ဆရာ အမြင်မတော်ဆင်တော်နဲ့ခလောက်ဆိုသလို မီဒီယာကြီးကြီးမားမားတခုအနေနဲ့ မှားယွင်းနေတာလေးကို ထောက်ပြပါရစေ။ နောင်လာနောင်သားတွေအနေနဲ့ အမှားကို အမှန်ထင်ကုန်ကြမှာစိုးလို့ပါ။ သမင် ချို /ဂျို / ဂြိုလ် ဘယ်ဟာ အမှန်လဲ။ ပို့ပေးတဲ့ပုံမှာ တန်ခိုးထွန်းလင်း စနေဂြိုလ်မင်းလို့ သတ်ပုံမှားရေးထားတယ်။ ဂြိုဟ်ကို ဟသတ်ရမယ်။ လသတ်မဟုတ်ပါ။
ထောက်ပြတာ မှန်တယ်။ ဂြိုလ်မရှိပါ။ ဂြိုဟ်သာရှိတယ်။ ချိုရှိတယ်။ ဂျို မရှိပါ။
မီးသဂြိုဟ် = မွန်စကားကနေလာတယ်။
ဝိဂြိုဟ်ကျင်းသည် = ဆန်းစ်ခရစ် ခေါ် သက္ကတဘာသာ သဂြဟကနေလာတယ်။ အနက်ပုဒ်ကို အထူးသဖြင့်ယူခြင်း။
သဂြိုဟ်ကျမ်း = ဆန်းစ်ခရစ် ခေါ် သက္ကတဘာသာ သဂြဟကနေလာတယ်။ အကျဉ်းအားဖြင့်ယူခြင်း။
ထောက်ပံ့သဂြိုဟ် = ဆန်းစ်ခရစ် ခေါ် သက္ကတဘာသာ သဂြဟကနေလာတယ်။ ထောက်ပံ့ခြင်း၊ ချီးမြှင့်ခြင်း။
ကိုယ့်ဘုရားကို ဝပ်တွားပူဇော်လိုက်ပါ၏။ (လူထုစိန်ဝင်း)
မှတ်ချက် = တအမှန်ကို တစ်အကြံအဖန်လုပ်မထားတဲ့စာအား ဝပ်တွားပူဇော်လိုက်ပါ၏။
Photo from Nay Thukha
Health tourism နိုင်ငံခြားကို ဆေးကုသွားတဲ့ ခေါင်းဆောင်များ
၂၉-၈-၂ဝ၁၇ နေ့ကထွက်တဲ့သတင်းမှာ အာဖရိကတိုက်ကနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေ နိုင်ငံခြားသွားသွားပြီး ဆေးကုနေကြတာကို ပြစ်တင်ဝေဘန်လိုက်ပါတယ်။ အာဖရိကတိုက်နိုင်ငံများကျန်းမာရေးဝန်ကြီးများအစည်းအဝေးမှာ တောင်အာဖရိက ကျန်းမာရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာ အာရွန် မော့ဆိုလီဒီက ပြောလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။
သူပြောနေချိန်မှာ အသက် ၉၃ နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ ဇင်ဘာဗွေသမတ ရောဘတ်မူဂါဘေဟာ စင်္ကာပူကိုဆေးစစ်ဘို့ ထွက်သွားပါတယ်။ မူဂါဘီရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူက မူဂါဘီကိုဆေးကုပေးတဲ့ဆရာဝန်ကလည်း အမည်း၊ အလွန်မည်း၊ တကယ်မည်းပါတယ်လို့ ခုခံကာကွယ်ပါတယ်။
နိုက်ဂျီးရီးယားသမတ မော်ဟာမဒူ ဘူဟာရီကတော့ ယူကေကိုဆေးသွားကုလေ့ရှိပါတယ်။ အင်ဂိုလာသမတ ဂျိုဆေး ဒူရာဒို ဆန်တို့စ်ကလည်း နိုင်ငံခြားပဲဆေးသွားကုတယ်။ ဘီနင်သမတ ပက်ထရစ် တာလုံလည်းအတူတူပဲ။
တောင်အာဖရိကကျန်းမာရေးဝန်ကြီးပြောတာတခု မှားတယ်။ သူက အဲလိုနိုင်ငံခြားဆေးသွားကုတဲ့တိုက်ဟာ အာဖရိကတိုက်တခုတည်းရှိတယ်တဲ့။ အာရှတိုက်ထဲကနိုင်ငံတခုအမည်နဲ့ စင်္ကာပူကို ဆေးသွားကုတဲ့လူကြီးတွေ အမည်တွေကိုတော့ ကျွန်တော့ထက် ပြည်တွင်းမှာနေသူတွေကပိုသိကြပါတယ်။ No Smile!
၃ဝ-၈-၂ဝ၁၆ နေ့ထုတ် ကြေးမုံသတင်းစာ စာမျက်နှာ ၂၁ မှာ ပြည်ထောင်စုမြန်မာစာခေါင်းစဉ်နဲ့ ầ စောလူကနေ ရေးတာပါတယ်။ စာရေးသူကိုယ်တိုင်က တပုဒ်လုံးမှာ တစ်တွေနဲ့ချည်းသာရေးထားပါတယ်။
စာလုံးပေါင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဖြစ်ဖြစ် အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ဖြစ်ဖြစ် ဟိုလိုလည်းဖြစ်နိုင် သည်လိုလည်းဖြစ်နိုင် ကြုံရတဲ့အခါ တစ်ခုတည်းကိုသာ ငှက်ရိုက်တုတ်စိုက် အသေလက်ခံတာ ဆရာအားမပေ့း့ လို့ ဖတ်ရပါတယ်။ အဲတာ ကိုးကားချက်ပါ။ စာရေးသူအရေးအသားအရ ကျေးဇူးရှင်ဆရာကြီး ဦးဆန်းထွန်းတဲ့။ ဆန်းထွန်း (မန်းတက္ကသိုလ်) ဟာ အဲဒီတုန်းက မြန်မာစာအဖွဲ့မှာပါတယ်။ ဦးဆန်းထွန်းဟောပြောတာတွေ နားထောင်ခဲ့ဘူးတယ်။ အဟောအပြော ကောင်းတယ်။ မြန်မာစာဌာနကထိကမဖြစ်ခင်မှာ ရဟန်းဝတ်နဲ့ ဓမ္မာစရိယအောင်ခဲ့တယ်။ သူကပဲ တတွေကို တစ်လုပ်ဘို့အကြံပေးခဲ့တယ်လို့ နားလည်ရပါတယ်။
ဆောင်းပါးရေးသူက တနဲ့ တစ်မှာ အမိန့်အာဏာနဲ့ခိုင်းစေတာကို စာရေးသူက ဝန်ခံထားတယ်။
အရင်က အဲလို သတ်ပုံကို မှားနေလို့မဟုတ်ဘဲ တမင်တကာပြောင်းလာတာကို ပေါ်လစီသတ်ပုံ၊ ကုထားထိုင်ရသတ်ပုံ စသဖြင့်အမည်ပေးခဲ့ပါတယ်။ အခုတော့ ပြည်ထောင်စုဘွဲ့ပေးလိုက်ပါပြီကောလို့ မှတ်သားရပါကြောင်း။
ကျွန်တော်သာ မြန်မာစာအကြောင်းရေးရင် ဘယ်သတင်းစာ၊ ဘယ်ဂျာနယ်၊ ဘယ်မဂ္ဂဇင်းကမှ ထုတ်ပေးမယ်မထင်လို့ ဖေ့စ်ဘွတ်ပဲအားကိုးရတယ်။
ဆရာရှင့် မွေးကင်းစကလေးငယ်ကို ခေါင်းအုံးနဲ့မသိပ်သင့်ဘူးလို့ သိထားပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ မြန်မာပြည်က လူတော်တော်များများက ကလေးငယ်များကို ခေါင်းအုံးအပါးလေးတွေနဲ့သိပ်တာတွေ့တွေ့နေရပါတယ်။
အဲ့ဒီလို ခေါင်းအုံးအပါးနဲ့သိပ်တာရော အန္တရာယ်ရှိနိုင်ပါသလားရှင့်။ ကျေးဇူးပြုပြီး အဲ့ဒီအကြောင်းလေး ရေးပေးစေချင်ပါတယ်။
အမေရိကန် Consumer Product Safety Commission စားသုံးသူ ထုတ်ကုန်စိတ်ချရမှုကော်မရှင်ရဲ့ လေ့လာမှုအရ ၁၉၉၂ ကနေ ၂ဝ၁ဝ ခုနှစ်အတွင်းမှာ ကလေးငယ်လေးတွေ (၁၂ လနဲ့အောက်) ၇ဝဝ ယောက်နီးပါးဟာ အိပ်စက်ခြင်းနဲ့ ဆက်စပ်ပြီး သေဆုံးခဲ့ကြရတယ်။ ခေါင်းအုံး၊ ကူရှင်၊ စတာတွေနဲ့ ဆက်စပ်လို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ကလေး ပုခက်ထဲသေဆုံးမှု တဝက်နဲ့ ရေချိုး
ကန်ထဲသေဆုံးမှု ၃ ပုံ ၂ ပုံတို့ဟာ အသက်ရှူလမ်း ပိတ်ဆို့လို့ သေဆုံးကြရတာ ဖြစ်တယ်။ ကလေးအိပ်စက်ရာနေရာဝန်ကျင်မှာ အပိုထားပေးတဲ့ ခေါင်းအုံး၊ ဂွမ်းကပ်၊ စောင် စတာတွေကနေ အဲလိုဖြစ်စေတယ်။
အကောင်းဆုံး၊ စိတ်အချရဆုံး ကလေးသိပ်နည်းက ကလေးအနားမှာ ဘာတခုမှ မထားပါနဲ့။ ခေါင်းအုံး မပါ၊ ဂွမ်းကပ်မပါ။ စောင်ပိုမပါ၊ အခုအခံမပါ၊ ကလေးကစားစရာမပါ၊ ကလေးချီပိုးစရာမပါ၊ တခြားဘာမှမပါ။ ပုံထဲပါကလေးပုခက်မှာသိပ်တာ စိတ်အချရဆုံးဖြစ်တယ်။
ကလေးနဲ့ လူကြီးမှာ ကွာတာတွေကိုသတိထားရမယ်။ အမေရိကမှာ တနှစ် ကလေး ၃၂ ယောက် ခေါင်းအုံးနဲ့သိပ်လို့ အသက်ရှူလမ်းပိတ်ပြီးသေဆုံးနေရတယ်။ အများစုဟာ အသက်အတော်ကိုငယ်လွန်းတဲ့ကလေးတွေဖြစ်တယ်။
ကလေးအိပ်တဲ့ပုံစံလုပ်ထားတာမျိုးနဲ့သိပ်တာလည်း မသင့်ပါ။ ကားပေါ်သယ်သွားနိုင်တဲ့ပုခက်မျိုးမှာ ကားပေါ်မှာမဟုတ်ရင် မသုံးသင့်ပါ။ ကလေးဗိုက်ခေါက်နေရင် အစာအိမ်ကိုဖိထားရာရောက်မယ်။ ကလေးအနေအထားပြောင်းလို့မရစေလို့ အချိန်ကြာလေ မသင့်လေဖြစ်မယ်။ ၂ဝဝ၃ ကနေတွက်ရင် ကလေး ၉ ယောက် ကားပေါ်သယ်ယူတဲ့ခုံထဲမှာ သေဆုံးခဲ့ရတယ်။
ကလေးပုခက်မှာတွဲဆက်ထားတဲ့ ကလေးကစားစရာပါနေရင် သေချာချည်နှောင်ချိတ်ဆက်ထားပါ။ ကြိုးစအပို၊ ရှည်နေတာ မပါစေနဲ့။ ကလေးလက်နဲ့ဆွဲချတာမျိုး လက်တကမ်းမှာမရှိစေပါနဲ့။ ရာသီဥတုအရ လိုအပ်မယ်ထင်ရင် ကလေးကို နွေးထွေးတဲ့အဝတ်ကို ဝတ်ထားပေးပါ။ စောင်မသင့်ပါ။ မျက်နှာနဲ့ နှာခေါင်းကို ဖိပိတ်မိနိုင်တယ်။ ကလေး ၄ လအောက်ဆို ပိုသတိထားရမယ်။
Wrapping babies မွေးကာစကလေးကို အနှီးဝတ်နဲ့ပတ်ခြင်း https://doctortintswe.blogspot.com/2015/08/wrapping-babies.html
ကလေးကို အနှီးဝတ်နဲ့ထုပ်ထားတာကို အယူအဆ နှစ်မျိုးရှိတယ်။ ထုပ်ပတ်ပေးထားရင် ကလေးကောင်းကောင်း အိပ်စေမယ်ဆိုတာတခု။ တချို့ကအဲတာကို သဘောမတူကြပါ။ ကိုယ်သဘောကျတာကိုယူနိုင်ပါတယ်။ ကလေး ၄-၆ လ ဆိုရင်တော့ ထုပ်ပေးမထားသင့်ပါ။ အနှီးဝတ်နဲ့ထုပ်ပေးတာမှာ အကျိုးကျေးဇူးတွေရှိတယ်။ ကလေးအိပ်စက်ချိန်ကို သတ်မှတ်ပေးရာကျတယ်။ ကလေးလက်ခြေတွေမ လိုအပ်ပဲလှုပ်တာကို တားဆီးပေးတယ်။ တကယ်လို့ ကလေးဗိုက်ထဲမှာ လေကြောင့်အောင့်မှာကိုလည်း တားဆီးပေးရာကျတယ်။
ကလေးကိုအနှီးဝတ်ပတ်ရာမှာ စိတ်ချရတဲ့နည်းကိုသုံးရမယ်။ ကလေးအသက်ကောင်းကောင်းရှူနိုင်စေရမယ်။ ကလေးခြေ (ဒူးဆစ် + ပေါင်ခြံ) တွေကွေးရာမှာ သက်တောင့်သက်သာရှိစေရမယ်။ ပုံမှာဖွံ့ထွားမှုကို အားပေးတဲ့အနေအထားဆိုတာ ပေါင်ခြံက ကွေးနေရမယ်။ ဒူးတွေက တဖက်နဲ့ တဖက် ကွာဝေးနေရမယ်။ ခြေထောက်လေးတွေ လှုပ်သာရှားသာ ဖြစ်ရမယ်။ ကလေးအနှီးစဟာ ချည်ထည်အပါးဖြစ်သင့်တယ်။ ခါသာပိတ်ပါးကိုလည်းသုံးနိုင်တယ်။ ကလေးစောင်တွေက လိုတာထက်ပိုပြီး အနွေးဓါတ်ရစေနိုင်တယ်။ ကလေးအဝတ်အစားကိုလည်း လိုတာထက်မပိုရပါ။ ရာသီဥတုနဲ့ ကိုက်ညီရမယ်။ ဖြစ်နိုင်ရင် တထပ်တည်းသာသင့်တယ်။
ကလေးအနှီးပတ်နည်းတွေရှိတယ်။ ကလေးလက်လေးတွေကို ကိုယ်နဲ့ကပ်နေစေရမယ်။ တချို့က လက်ကို မျက်နှာနဲ့ ကပ်နည်းသုံးတယ်။ လက်စုပ်ချင်လည်းရစေတယ်။ လက်လေးတွေကို အောက်မှာဆန့်မနေစရပါ။ လက်နှစ်ဖက်ကို ရင်ပတ်ရှေ့ ကြက်ခြေခတ်သလိုဖြစ်သင့်တယ်။
အနှီးစကို ဖြန့်ခင်းပါ။ ဒေါင့်စွန်တခုကို (၆ လက္မ) နည်းနည်းခေါက်ပြီး ကလေးဦးခေါင်းကိုအနေတော် ဖုံးအုပ်စေပါ။ မေးအောက်ကို အဝတ်စလေးကပ်ပေးရင် ဦးခေါင်းပုံပေါ်စေမယ်။ ဘယ်ဖက်လက်ကနေစပြီးအနှီးကိုဖုံးပြီး အစွန်းကို ညာဖက်လက်အောက်ထိုးသွင်းပါ။ အောက်ဖက်ကအနှီးအစွန်းကို ကလေးမေးဖက်ဆီယူပြီး အစသတ်ပါ။ ညာဖက်ကိုလည်း အဲလိုလုပ်ပါ။
ကလေးခေါင်းကိုဖုံးမထားတဲ့နည်းဖြစ်တယ်။ ကလေးအနှီးစကို အစွန်းတဖက်ကို ၈-၁ဝ လက္မအထိ ခေါက်ပါ။ ခေါက်တဲ့ဖက်မှာ ကလေးခေါင်းကို ဖေါ်တားပြီး အနှီးခေါက်ရိုးက ကလေးပခုံးနဲ့တပြေးညီထားပါ။ ကလေးလက်နှစ်ဖက်ကို ရင်ပတ်ရှ့မှာ လက်ပိုက်သလိုစုထားပေးပါ။ အနှီးဘယ်ဖက်စွန်အစကို ကလေးရှေ့ကနေ ညာဖက်ကိုယူပြီး ညာဖက် ကိုယ်အောက်မှာသွင်းပါ။ ကျန်တဖက်ကိုလည်း အလားတူလုပ်ရင် အစွန်းက ကလေးရဲ့နောက်ဖက်မှာသာ ရောက်နေမယ်။ ကလေးခြေထောက်တွေက ကွေးသာနေမယ်။ အောက်အစွန်းအနှီးစကို ကလေးနောက်ဖက်မှာ သိမ်းယူပါ။
Sleeping bags ကလေးအိပ်စရာအိတ်
ကလေးချော်ထွက်ကျတာကို သက်သာစေတယ်။ ကလေးခြေထောက်တွေ ပုခက်ကနေအပြင်ထွက်မကျစေဘူး။ အရွယ်အစား အနေတော်ရမယ်။ ကလေးအဝတ်အစားဟာ အခန်းတွင်းအပူချိန်နဲ့ အနေတော်ရမယ်။ အေးနေရင် ကလေးစောင်အပိုတခု လိုနိုင်တယ်။
Safe sleeping စိတ်ချရတဲ့အိပ်စက်ခြင်း
ကလေးကိုကျောနဲ့သာအိပ်စေပေါ။ ကလေးမျက်နှာကို အဝတ်မဖုံးစေပါနဲ့။ ပုခက်ကစိတ်ချရပါစေ။ မွေ့ယာသုံးရင် ခွက်နေတာ မရှိပါစေနဲ့။ ပုခက်ထဲမှာ ကလေးကစားစရာ မထားပါနဲ့။
အဲတာကိုတချို့က နည်းဟောင်းလို့ပြောတာလည်းရှိတယ်။ ကလေးရဲ့ သဘာဝတုန့်ပြန်မှုကို တားဆီးရာကျတယ်လို့ ဆိုတယ်။ ကလေးဟာအိပ်ပျော်နေလည်း ခြေလက်ဆတ်ကနည်းလှုပ်ရှားတာကို startle reflex (hypnagogic startles) လို့ ခေါ်တယ်။ အဲတာကပုံမှန်ဖြစ်တယ်။ ပတ်ထားရင် အဲတာလုပ်မရစေဘူးလို့ ထောက်ပြတယ်။ တဖက်ကကြည့်ရင် အဲလို over-stimulated အလွန်အကျွံဖြစ်မှာကို အနှီးပတ်ထားတာကနေ တားဆီးပေးနိုင်တယ်လို့ ဆိုတယ်။
အနှီးနဲ့မပတ်မီမှာ ကလေးစိုနေသလား၊ ဆာနေသလားသိပါ။ ကလေးအသက်ကောင်းကောင်းရှူနိုင်စေရမယ်။ ပတ်ထုပ်ပြီးနောက် စောင်ထပ်မခြုံပါနဲ့။ အသက်ရှူတာကို ဖိထားသလိုမဖြစ်စေပါနဲ့။ တချို့အယူအဆက ကလေးတလရှိတဲ့အထိ အနှီးနဲ့ထုပ်ပတ်စေဘို့အကြံပြုတယ်။ အချိန်သတ်မှတ်ချက်တခုက ကလေးဟာ ထုပ်ပတ်ထားတဲ့ အနှီးဝတ်ထဲကနေ ရုန်းကန်လာရင် ပတ်ထုပ်တာကိုမလုပ်ပါနဲ့တော့။
တချို့အယူအဆက မွေးကာစကလေးကိုအနှီးနဲ့ထုပ်ပတ်ပေးခြင်းဟာ အနုပညာဆန်တဲ့ အတတ်ပညာတခုဖြစ်တယ်။ တချို့သားဖွါးခန်းတွေကနေ သင်ပေးတယ်။ ကလေးတွေက မတူကြပါ။ တချို့ကလေးက အနှီးနဲ့ပတ်ထားတာကို သဘောကျပြီး တချို့ကလေးတွေကမကြိုက်ပါ။ တချို့ကလေးက လက်တွေကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ထားချင်တယ်။ ကိုယ့်ကလေးအကြောင်းကိုယ်သိပါ။
အချုပ်ပြောရရင် မွေးကာစကလေးကို အနှီးဝတ်နဲပတ်တာဟာ ငါးချဉ်ထုပ်သလို မဟုတ်ပါ။ မုန့်ဖက်ထုပ်သလို မဟုတ်ပါ။ ကလေးအသက်ရှူမှုကို လွတ်လွတ်လပ်လပ်ရှိစေရမယ်။ ကလေးမွေးမွေးချင်း အပူချိန်မနည်းဖို့က အလွန်အရေးကြီးတယ်။ အခန်းအပူချိန်ဟာ အမိဝမ်းတွင်းထဲတုံးကရှိခဲ့တဲ့ ၉၈့၆ ဖါရင်ဟိုက်ထက် အမြဲနည်းပါတယ်။ ကလေးကိုနွေးထွေးအောင် အနှီးပတ်ပေးထားဖို့လိုပါတယ်။ သားဖွါးဆရာမကနေ အဲလို သပ်ရပ်ရပ်ထုပ်ပေးပြီး ကိုယ့်ရင်သွေးကလေးကို မြင်ချင် ပွေ့ချင်နေတဲ့ ကလေးအမေ့လက်ထဲအပ်ပါမယ်။ အဲဒီအခိုက်အတန့်လေးဟာ လှပတယ်။ ချစ်စရာကောင်းတယ်။ ဖိုတိုရှော့တွေလာမယ်။ ဒိနောက်မှာတော့ မိခင်သဘောကျ စနစ်တကျလုပ်ပါလေ။
လတ်တလော ရခိုင်ဒေသမြောက်ပိုင်းကသတင်းတွေဟာ တိုင်းပြည်လုံခြုံရေးအတွက်ပါ စိုးရိမ်စရာကောင်းပါတယ်လို့ ကျွန်တော် ၁၂-၁ဝ-၂ဝ၁၆ နေ့ကရေးခဲ့ပါတယ်။
Rohingya Solidarity Organisation (RSO) ရိုဟင်ဂျာသွေးစည်းညီညွတ်ရေးအဖွဲ့ကို ၁၉၈၂ မှာဖွဲ့ခဲ့တယ်။ ၁၁-၇-၂ဝ၁၃ နေ့က ဂျကာတာပို့စ်သတင်းစာမှာ ရိုဟင်ဂျာ ၂ ယောက် အင်ဒိုနီးရှား ဈေးဝယ်ရောက်လို့ပါတယ်။ တိုက်ခိုက်မဲ့သူတွေ၊ လက်နက်တွေ၊ ငွေကြေးနဲ့ ဗုံးလုပ်နည်း ဆရာတွေ လာရှာတာဖြစ်တယ်။ ဘာသာရေးဆရာ Abu Arif အဘူ အာရစ်ဖ်နဲ့ စစ်သွေးကြွကွန်မင်ဒါ အဘူ ရှက်ဖီယာတို့ ဖြစ်တယ်။ RSO ရိုဟင်ဂျာသွေးစီးညီညွတ်ရေးအဖွဲ့ကဖြစ်ကြတယ်။ သူတို့အဆိုအရ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ စစ်သင်တန်းတက်နေတဲ့ ရိုဟင်ဂျာ ၃ဝဝ ရှိနေ။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကို တိုက်ခိုက်ဘို့ ဖြစ်တယ်။ ဒီခရီးစဉ်ကို အစွန်းရောက် Ar Rahmah Media Network ဝက်ဘ်ဆိုက်ကနေ ဖေါ်ပြထားတယ်။ ဒါဟာ မြန်မာ့ပြဿနာ နယ်နိမိတ်ကျော်ထွက်လာတာကို ပြသနေတယ်။ မနေ့က JI ဂျေအိုင် ထောင်ထားတဲ့ Ar Rahmah အာရ် ရာမာ ဝက်ဘ်တိုက်မှာ ရခိုင်မှာ စစ်သင်တန်းတက်နေတဲ့ ရိုဟင်ဂျာတွေရဲ့ ဓါတ်ပုံ ၂၈ ပုံတင်ထားတယ်။ Ramadan gift ရမ်ဒမ်လက်ဆောင် လို့ ခေါင်းစဉ်ပေးထားပြီး ကမ္ဘာကြီးကနေ ရခိုင်မှာ jihad ဂျီးဟဒ်လုပ်ဘို့ တောင်းဆိုထား။ ICG နိုင်ငံတကာပဋိပက္ခအုပ်စုက အကြီးတန်းအကြံပေး Sidney Jones ဆစ်ဒနီ ဂျုံးစ်ပြောတာက JI နဲ့ RSO ဆက်စပ်မှုက သမိုင်းရှိတယ်။ အာဖကန်နစ္စတန်ကနေစတယ်။ အင်ဒိုနီးရှားလူမျိုး Muhammad Jibril မူဟာမက် ဂျီဘရေးလ်ဟာ JI အဖွဲ့ရဲ့ ကရာချိအခြေစိုက် Al-Ghuraba အယ်လ်ဂွါရာဘာရဲ့ ဆဲလ်ဖြစ်ပြီး၊ Al-Qaeda အယ်လ်ကိုင်ဒါနဲ့ Taleban တာလီဘန်တို့နဲ့ အဆက်အစပ်ရှိသူ ဖြစ်တယ်။ အမေရိကန်ကနေ ၂ဝ၁၁ မှာ လိုချင်သူစာရင်းသွင်းထားတယ်။
Jihadi terrorism (JT) ဂျီးဟဒ် အကြမ်းဖက်ဝါဒ
အကြမ်းဖက်မှုကို ဗျူဟာကျကျစဉ်းစာဘို့လိုတယ်။ အဲဒါက နည်းလမ်းနဲ့ အဆုံးသတ်စည်းမျဉ်းဆိုတာပါ။ အကြမ်းဖက်မှုရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကတော့ အရပ်သားတွေကို ပျက်စီးထိခိုက်ပြီး၊ အသေသတ်ပြစ်မယ်၊ ဒီလိုလုပ်လိုက်တာဟာ ကျိုးကြောင်း ဆီလျှော်တဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကို အထောက်အကူပြုဘို့ ဖြစ်တယ်။ ခေါင်းဆောင်လုပ်နေသူကို သတ်ပြစ်ပြီး၊ အုပ်ချုပ်မှုကို ပြောင်းချင်တယ်၊ ကိုလိုနီ ကျွန်ပြုခံထားရာကနေ လွတ်လပ်ချင်တယ် ဆိုတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ လုပ်ဆောင်ချက် နည်းလမ်းဟာ ဘယ်လောက်ဆိုးရွားပါစေ ရလဒ်ဟာ သီအိုရီအရ မဖြစ်နိုင်တာ မဟုတ်ပါ။ အဲလိုသတ်လိုက်ပြီးနောက် ဖွဲ့စည်းပုံအသစ်တခုဆွဲမယ်၊ ဒါမှမဟုတ် နိုင်ငံရပ်ခြားများ ပိုင်ဆိုင်ထားတာကို လက်လွတ်စေမယ်။ ဒီနည်းဟာ ကိုလိုနီ လွတ်မြောက်ရေး စစ်ဗျူဟာဖြစ်ပါတယ်။ လွတ်လပ်ရေး ရပြီဆိုရင် ဥပမာ ကင်ညာနိုင်ငံက Mau Mau မော်မော်နဲ့ အယ်လ်ဂျီးရီးယားက FLN အက်ဖ်အယ်လ်အင်တို့ဟာ အရင်လုပ်ခဲ့တဲ့ သတ်ဖြတ်မှုတွေကို ရပ်စဲလိုက်ကြတယ်။ သူတို့ရဲ့ ပြစ်မှတ်ဆိုတာလဲ မရှိတော့လို့ ဖြစ်တယ်။
(JT) ဂျီးဟဒ် အကြမ်းဖက်ဝါဒကတော့ အဲလို မဟာဗျူဟာပုံစံနဲ့မကိုက်ညီပါ။ အချက် (၃) ချက်ရှိပါတယ်။
၁။ ရည်ရွယ်ချက်ဆိုတာက ပြောင်းပြောင်းနေတယ်။
၂။ အဆုံးသတ်ဆိုတာ အဆုံးမရှိဖြစ်နေတယ်။ ရချင်တယ်ဆိုတာကိုလဲ တပြားမှ လျှော့လို့မရတာမျိုးဖြစ်တယ်။
၃။ အဆုံးသတ်လို့ သတ်မှတ်ထားတာမျိုးကလဲ တကယ့်အရှိတရားတွေ မဟုတ်ဘူး။
JT ဂျီးဟဒ် အကြမ်းဖက်ဝါဒဆိုတာ ရှိနေတာမျိုးတော့ဖြစ်ပြီး၊ အောင်မြင်မှုရနိုင်တာမျိုး မဟုတ်ပါ။ သူတို့ လိုချင်တယ် ဆိုတာကို ရရင်လဲ အနည်းအကျဉ်းသာဖြစ်ပါမယ်။ အဓိက မျှော်မှန်းချက်ဆိုတာကို ကိုယ့်လူ ဆိုသူတွေကိုယ်၌က တကယ်တန်း ယုံကြတာ မဟုတ်ပါ။ သူတို့က ဘာကို တကယ် လိုချင်တာလဲ ဆိုတာကို ဆန်းစစ်မှု စနစ်တကျ လုပ်တဲ့အခါမှာ ပုံမှန် နိုင်ငံရေးလုပ်ရိုး လုပ်စဉ်အတိုင်း အပေးအယူဆိုတာနဲ့ ချကြည့်လိုက်ရင် အံကိုက်မကျပါ။ ဒါကြောင့် အနောက်ကမ္ဘာ နဲ့ JT ဆိုတာ မဟာဗျူဟာ အရာမဟုတ်ပါ။
ကိုးကားချက်။ Hoover Institution Stanford University စတင်းဖို့ဒ် တက္ကသိုလ်၊ ဟူးဘား အင်စတီကျူးရှင်းမှာ Josef Joffe ဂျိုးဇက် ဂျော်ဖီရေးသားတဲ့ Jihadi Terrorism’s Moving Targets ဂျီဟဒ်ဒီ အကြမ်းဖက်မှုရဲ့ ရွှေ့ပြောင်းနေတဲ့ ပစ်မှတ်များ
၂ဝ၁၃ ခုနှစ် ဇူလိုင်လထဲမှာ ရိုဟင်ဂျာအရေးအတွက် မြန်မာနိုင်ငံကိုတိုက်ခိုက်မဲ့ အကြမ်းဖက်စခန်း ဘင်္ဂလားဒက်ရှ် နယ်စပ်မှာဖွင့်ထားပြီလို့ သတင်းရှိခဲ့ပါတယ်။ အိန္ဒိယပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနကနေ ပါကစ္စတန်အခြေစိုက် LeT အဖွဲ့နဲ့ ဆက်နေတာဖြစ်ပြီး မြန်မာရိုဟင်ဂျာတွေအတွက် လက်စားချေဘို့လို့ ယူဆကြောင်း ပြောလိုက်ပါတယ်။ အိန္ဒိယ-ဘင်္ဂလားဒက်ရှ် ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနတွေအစည်းအဝေးမှာ LeT/Jamaat-ud-Dawah (JuD) တို့ပူးတွဲပြီး ရိုဟင်ဂျာအရေးကို အခွင့်ကောင်းယူပြီး ဘင်္ဂလားဒက်ရှ်-မြန်မာ နယ်စပ်မှာ ရှေ့တန်း စခန်းသစ် ဖွင့်မယ်လို့ အသိပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေရာဟာ သူပုန်ထူထပ်ရာ အိန္ဒိယ အရှေ့မြောက်ဒေသနဲ့လဲ နီးပါတယ်။ အိန္ဒိယပြည်ထဲရေးအတွင်းဝန်ကနေ လွန်ခဲ့တဲ့ ၆-၇ လ ကတည်းကနေ ဒီလှို့ဝှက်လုပ်ငန်းတွေ ရှိနေခဲ့တယ်လို့ ပြောလိုက်တာပါ။
LeT နဲ့ Jaish ကွန်မင်ဒါတွေကနေ ဒေသခံ Jamaat-ul-Mujahideen Bangladesh (JMB) အကူအညီနဲ့ စစ်သင်တန်းတွေ ပေးနေတာလို့လဲ ဆိုပါတယ်။ JMB အဖွဲ့ဟာ NGO လိုဖွဲ့ထားတဲ့ RSO နဲ့ ဆက်နေတာလဲဖြစ်ပါတယ်။ လက်နက်ကိုက်တွယ် ပစ်ခတ်၊ ဖြုတ်တပ်နည်းနဲ့ ဗုံးလုပ်နည်း-ဗုံးခွဲနည်းတွေကို သင်ပေးနေပါတယ်။ Lashker/JuD အဖွဲ့ကae ၂ဝ၁၂ နှစ်လည်က အဖွဲ့သစ်တခုဖြစ်တဲ့ Difa-e-Musalman Arakan (Burma) Conference (Defence of Muslims in Myanmar) ကို ဖွဲ့ခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာအစိုးရ ဆန့်ကျင်ရေး ရိုဟင်ဂျာအဖွဲ့ ဖြစ်ပါတယ်။ JuD ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Nadeem Awan နဲ့ JuD ထုတ်ဝေဖြန့်ချိရေးအဖွဲ့ဝင် Shahid Mahmood Rehmatullah တို့ကို သြဂုတ်လထဲမှာ လျို့ဝှက်ပြီး ဘင်္ဂလားဒက်ရ်ှနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံက အလားတူ အကြံတူအဖွဲ့တွေနဲ့ ဆက်သွယ်ဘို့ တာဝန်ပေးခဲ့ပါတယ်။ အကြမ်းဖက်အဖွဲ့တွေ ဖြစ်ကြတဲ့ Harkat-ul-Jihadi Islami, Jaish-e-Mohammed နဲ့ JMB တို့ဟာ ရိုဟင်ဂျာအတွက် ဘင်္ဂလားဒက်ရ်ှမှာ စခန်းသစ် တည်နေကြပါတယ်။ အဖွဲ့သစ် Jammat-ul-Arakan ထဲမှာ JMB နဲ့ အစွန်းရောက် ရိုဟင်ဂျာတွေ ပါဝင်နေပါတယ်။
LeT ဟာ ပါကစ္စန်အခြေစိုက် Laskher-e-Taiba ဖွဲ့ဖြစ်ပြီး၊ IM ဟာ အိန္ဒိယအခြေစိုက် Indian Mujahideen ဖြစ်တယ်။ R&AW ခေါ်တဲ့ အိန္ဒိယ နိုင်ငံခြားရေးထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့အဆိုအရ LeT ရဲ့မြေပေါ်အဖွဲ့အစည်းဟာ Jamaat ud Dawah (JuD) ဖြစ်ပြီး၊ ရိုဟင်ဂျာတွေကို ခွဲခြားဆက်ဆံခံရ၊ တိုက်ခိုက်ခံရတာတွေကို တန်ပြန်ဘို့ ဒီလို စခန်းသစ်ဖွင့်မှာ ဖြစ်တယ်။ JuD အဖွဲ့ရဲ့ ခေါင်းဆောင် Hafiz Muhammad Saeed က ရိုဟင်ဂျာ အကျိုးစီးပွါးအတွက် မြန်မာဆန့်ကျင်ရေး ကင့်ပိန်းကို ပါကစ္စတန်ကနေပြီး၊ ဦးဆောင်နေတယ်။ သူ့လူတွေ အခုတလော ဘင်္ဂလား-မြန်မာ နယ်စပ်ကို အခေါက်ခေါက် သွားနေကြတယ်။ ၂ဝ၁၂ နှစ်လယ်ပိုင်းတုံးက Difa-e-Musalman Arakan (Burma) Conference ကွန်ဖရင့်ကို ကျင်းပခဲ့တယ်။ ဒါဟာ Defence of Muslims in Myanmar မြန်မာနိုင်ငံက မွတ်ဆလင်တွေ ကာကွယ်ရေးလို့ အဓိပ္ပါယ်ရတယ်။ မြန်မာအစိုးရကို ပြစ်မှတ်ထားတာဖြစ်တယ်။ LeT/JuD ပူးတွဲအဖွဲ့ကနေ JuD ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Nadeem Awan နဲ့ JuD ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေရေးလက်တံ အဖွဲ့သား Shahid Mahmood Rehmatullah တို့နှစ်ယောက်ဟာ ၂ဝ၁၂ သြဂုတ်လထဲတုံးက ဘင်္ဂလားဒက်ရ်ှနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံက စိတ်တူသဘောတူအဖွဲ့တွေကို စည်းရုံးဆက်သွယ်ခဲ့ကြတယ်။ ဘင်္ဂလားဒက်ရ်ှက ပြန်လာပြီးနောက် ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ ကရာချိမှာ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလုပ်ပြီး ဘင်္ဂလားဒက်ရ်ှကို မြန်မာနိုင်ငံကနေ ရောက်လာကြတဲ့ ရိုဟင်ဂျာတွေကို ပြစ်ပယ်ထားတယ်ဆိုပြီး အပြစ်တင်ခဲ့တယ်။ အဲဒီ JuD/LeT ကလူတွေရဲ့ ဘင်္ဂလားဒက်ရှ် လှို့ဝှက်ခရီးဟာ Cox's Bazaar မှာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကို ပြစ်မှတ်ထားတဲ့ လူမျိုးရေး အကြမ်းဖက်မှုတွေ ဆက်ဖြစ်စေခဲ့တယ်လို့ ယုံကြည်ရတယ်။ အလားတူ စိတ်ဝင်စားဘို့အချက်ကတော့ Harkat-ul-Jihadi Islami အဖွဲ့၊ Jaish-e-Mohammed အဖွဲ့နဲ့ Jamaat-ul- Mujahideen Bangladesh အဖွဲ့၊တွေဟာ ရိုဟင်ဂျာ NGOs တွေထဲက RSO နဲ့ဆက်ပြီး၊ ရိုဟင်ဂျာအကျိုးကိုလိုက်လုပ်ပေးနေကြတယ်။ ဘင်္ဂလားထောက်လှန်းရေးတွေကနေ Jammat-ul-Arakan ဆိုတဲ့အဖွဲ့သစ်ထဲမှာ JMB နဲ့ ရိုဟင်ဂျာ တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေ ပါဝင်နေတာကို မြန်မာ-ဘင်္ဂလားဒက်ရှ် နယ်စပ် Bandarban ခရိုင်မှာ စုံစမ်းနေတယ်။ ဘင်္ဂလာဒက်ရှ် ရဲ့အဖွဲ့က ဘဏ်အကောင့်ကို စစ်ပြီးနောက်မှာ Maulana Mohammad Yunus ကို Cox's Bazaar မှာရှိတဲ့ Rau Upazilla မှာ ပြီးခဲ့တဲ့ သြဂုတ်လမှာ ဖမ်းခဲ့တယ်။ ဒါ့အပြင် ကရာချိက Maulana Shabir Ali Ahmed ဆိုသူဟာ Jaish နဲ့ ဆက်နေတဲ့ ဘင်္ဂလားဒက်ရှ် ရိုဟင်ဂျာ တယောက်ဖြစ်တယ်။ Madarasa ခေါ်တဲ့ အစ္စလာမ်ဘာသာရေးသင်တန်းကျောင်းကနေ လှုပ်ရှားနေသူ နောက်တယောက်ကတော့ Abdur Rehman ခေါ် Imran ခေါ် Mustafa ဖြစ်တယ်။ Cox's Bazaar က Teknaf က ဖြစ်တယ်။ သူကနေ ပါကစ္စတန်မှာ သင်တန်းဆင်းလာသူ Myanmarese mujahideen မြန်မာ-မူဂျာဟီဒင်တွေကို နေရာချဘို့ တာဝန်ယူရတယ်။ Shafiul Alam ဆိုသူဟာ ပါကစ္စတန်နဲ့ နီပေါနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုင်ထားသူဖြစ်တယ်။ ပါကစ္စတန်နဲ့ ဘင်္ဂလားဒက်ရ်ှကို ခဏခဏခရီးသွားတယ်။ သူ့ကို Abdul Karim ခေါ် Mohammed Nur Alam ဆိုသူ နီပေါနိုင်ငံအခြေစိုက် ရိုဟင်ဂျာအဖွဲ့သား ငွေအတု ဖြန့်ဖြူးရေးဂိုဏ်းနဲ့အတူ မြန်မာ-ဘင်္ဂလားနယ်စပ်မှာ ရိုဟင်ဂျာ အစွန်းရောက်တွေအတွက် စခန်းသစ် ဖွင့်ဘို့လုပ်နေကြတယ်။ သူတို့ဟာ ပါကစ္စတန်က LeT ကွန်မင်ဒါ Ustad Abdul Hamid ကိုတိုင်ပင်ကြတယ်။
ကိုးကား = ၂၁-၇-၂ဝ၁၃ နေ့ထုတ် The Times of India သတင်းစာ၊ Terror Activities in Bangladesh-Burma Border|Laskher-e-Taiba|Indian Mujahideen|Burma Ethnic Clashes|Solidarity
မူဂျာဟစ်ဒင်ဆိုတာ Strugglers ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သူများ ဒါမှမဟုတ် People doing jihad အလာရှင် အလိုတော်ကျ လုပ်တဲ့ မွတ်ဆလင်လို့ အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။ Jihad ဂျီးဟဒ်ဆိုတာက ကြိုးပမ်းလုပ်ဆောင်ခြင်းလို့ ဆိုလိုပါတယ်။ ကနေ့ကာလမှာ အနောက်ကမ္ဘာမှာ အသုံးများတာကတော့ Mujahideen ဆိုတာကို Radical Islam အစွန်းရောက် အစ္စလမ်ဘာသာနဲ့ တွဲထားလေ့ရှိပါတယ်။ ၁၉၆ဝ ကနေစတဲ့ ခေတ်ပေါ် ဂျီးဟဒ်ဒဇင်မ်ထဲမှာ သူပုန်ထခြင်း၊ ပျောက်ကျားစစ်၊ နိုင်ငံတကာ အကြမ်းဖက်အဖွဲ့၊ စတဲ့နည်းတွေကို အသုံးပြုနေတယ်။ အာဖကန်နစ္စတန်၊ မြန်မာ၊ ဘော့စနီးယား-ဟက်ဇာဂိုဘီးနား၊ အိန္ဒိယ-ပါကစ္စတန်၊ အီရန်၊ အီရတ်၊ ကော့ကေးဆပ်မြောက်ပိုင်း၊ ကိုဆိုဗို၊ နိုက်ဂျီးရီးယား၊ ဖိလစ်ပိုင်၊ ဆိုမာလီနဲ့ ဆီးရီးယားနိုင်ငံတွေမှာ ရှိနေတယ်။
၁၉၄၉ ခုနှစ်တုံးက ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာ မူဂျာဟစ်ဒင်တွေ အရေအတွက်တစုံတရာအထိ ရှိခဲ့တယ်။ Mir Cassim မားရ်ကက်ဆင်က ဦးဆောင်ခဲ့တဲ့အဖွဲ့ကို Mujahids မူဂျာဟစ်လို့ခေါ်တယ်။ အဖွဲ့ဝင်တွေဟာ အဓိကအားဖြင့် အရှေ့ပါကစ္စတန်၊ ယခု ဘင်္ဂလားဒက်ရ်ှနိုင်ငံသားတွေဖြစ်တယ်။ ၁၉၅ဝ မှာ မြန်မာစစ်တပ်က နှိမ်နင်းပြစ်နိုင်ခဲ့တယ်။ မားရ်ကက်ဆင်ဟာ Cox's Bazar ကော့်ဆက်ဘဇားမှာ အသတ်ခံရပြီး နောက်လိုက် နောက်ပါတွေလဲ လက်နက်ချခဲ့ရတယ်။ သူတို့မျိုးဆက်တွေကို မေးတဲ့အခါ သူတို့ကိုယ်သူတို့ ရိုဟင်ဂျာလို့ ပြောကြတယ်။
၁၉၆၂ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်း အာဏာမသိမ်းခင်အထိ သူတို့ဟာ အတော်တက်ကြွနိုင်ခဲ့သေးတယ်။ ဗခက နေဝင်းက အနှစ် ၂ဝ ကျော်ကြာအောင် နှိမ်နင်းခဲ့တယ်။ ၁၉၇၈ နဂါးမင်းစစ်ဆင်ရေးက နာမည်ထွက်ခဲ့တယ်။ ဒီစစ်ဆင်ရေးကြောင့် သူတို့ အများစုဟာ ဘင်္ဂလားဒက်ရ်ှကို ထွက်ပြေးပြီး ဒုက္ခသည်တွေဖြစ်လာကြတော့တယ်။ ဒါပေမဲ့ ရခိုင် မြောက်ပိုင်းမှာ ဆက်ပြီးရှိနေသေးပါတယ်။ သူတို့ဟာ ဘင်္ဂလားဒက်ရှ် မူဂျာဟစ်ဒင်တွေနဲ့ ပိုနီးစပ်တာသာမကဘဲ မလေးရှား၊ ပါကစ္စတန်က အလားတူအဖွဲ့တွေနဲ့ ကွန်ယက်ဖွဲ့ထားကြတယ်။ ရံပုံငွေတွေကောက်ပြီး မြန်မာပြည်ပြင်ပမှာ စစ်သင်တန်းတွေတက်နေကြတယ်။ အစဆုံးလှုပ်ရှားမှုက (၁၉၄၇-၁၉၆၁) ဖြစ်တယ်။ မေယုဒေသကို အရှေ့ပါကစ္စတန်ထဲ ရောက်သွားတယ်။ ၁၉၇ဝ-၇၁ အရှေ့ပါကစ္စတန်ကနေ ဘင်္ဂလားဒက်ရ်ှလွတ်လပ်ရေးစစ်ပွဲမှာပါခဲ့ကြတယ်။ ၂ဝ၁ဝ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ အဓိကရုဏ်းတွေဖြစ်တော့ သတင်းတွေအရ သူတို့ဟာ ရခိုင်ထဲမှာ လွတ်လပ်ရေး ဒါမှမဟုတ် ကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်ခွင့်ကို တောင်းဆိုလာကြတယ်။
အခု RSO အမည်သိပ်မထွက်တော့ပဲ ARSA အာရကန်ရိုဟင်ဂျာကယ်တင်ရေးတပ်နာမည်က ရှေ့ရောက်လာတယ်။ နောက်ခံအချက်အလက်တွေနဲ့ သူတို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေ အတူတူသာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော် သမိုင်းဆရာမဟုတ်ပါ။ ကိုးကားတဲ့အချက်အလက်တွေ ကွဲတာလွဲတာ ရှိနိုင်ပါတယ်။ လိုတာထပ်ဖြည့်နေပါတယ်။
ကျတော် တို့ ငြင်းနေလို့ပါ ဆရာ။ ကိုတ်ကို အသံထွက်လို့ရပါသလားဆရာ။ ရှေ့ကတခုခုပါရင်တော့ အနီးစပ်ဆုံး ဆွဲထွက်ကြရင်း ငြင်းနေကြတာပါ ဆရာ။ ကိုက်ကို ငြင်းတာပါဆရာ။ မကိုဋ်တကိုက်လို့ပါဆရာ။
တကိုက် = နှစ်တောင် = ၃ ပေ
မကိုဋ် (မကုဋ) = အထွဋ်အဖျား၊ သရဖူ၊ ဥသျှောင်
၂၉-၈-၂ဝ၁၇ သတင်း = ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်နေတဲ့ အစွန်းရောက် အကြမ်းဖက်သမားတွေရဲ့ ရည်မှန်းချက်ဟာ နယ်မြေပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်တယ်လို့ တပ်မတော်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ကပြော
ကျွန်တော် ၁၈-၇-၂ဝ၁၃ နေ့က အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ နယူးဒေလီမြို့ ဟောပြောပွဲတခုမှာ နိဂုံးအဖြစ်ပြောခဲ့ရှိပါတယ်။ အိန္ဒိယနိုင်ငံသား မြန်မာ့အရေးသုံးသပ်သူ ကာနယ် ဘီ ဟာရီရာမန်ကနေ ရိုဟင်ဂျာအရေးဟာ ဘင်္ဂလားဒက်ရ်ှနဲ့ အရှေ့တောင်အာရှမှာ နောက်ဆုံးခြေကုပ်ယူဘို့ ကြိုးစားနေကြတဲ့ အစ္စလာမ်းမစ် အစွန်းရောက်တွေအဖို့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ခြေကုပ်သစ်တခု ရကောင်းရလာနိုင်တယ်လို့ ရေးပါတယ်။ သူ့သုံးသပ်ချက်သာ မှန်ရင် ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်၊ နောက်တိုက်ပွဲဟာ မြေနေရာကွက်အတွက်ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော် မှားပါစေလို့ ဆုတောင်းပါတယ်။
Rakhine (Myanmar) to Bodh Gaya (India) - Understanding Buddhist-Muslim Conflict
ရခိုင် (မြန်မာ) မှသည် ဗုဒ္ဓဂယာ (အိန္ဒိယ) သို့ - ဗုဒ္ဓဘာသာနှင့် မွတ်ဆလင်ပဋိက္ခ နားလည်ရအောင်
အိန္ဒိယနိုင်ငံတကာ စင်တာ၊ နယူးဒေလီ၊ ၁၈-၇-၂ဝ၁၃
A War foraName နာမည်တလုံးအတွက်စစ်ပွဲ
ဒီအရေးကြီးတဲ့ဆွေးနွေးပွဲမှာ စကားပြောဘို့ ဖိတ်ကြားတဲ့အတွက် India Foundation ကို အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ သဘာပတိ မစ္စတာ ချန်ဒန် မစ်ထရာ၊ သံအမတ်ကြီး ဘက်ရ်ှကာ မစ်ထရာတို့ကို လေးစားပါတယ်။
ရိုးရိုးသားသား ပြောပါရစေ။ ကျွန်တော့်အမြင်ဟာ မြန်မာ-ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တယောက် အမြင်ပါ။ မြန်မာနိုင်ငံဆိုတာ ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ ဦးနှောက် (အသိဥာဏ်) နဲ့ နှလုံးသား တည်ရှိရာ ဗုဒ္ဓဂယာမှာ ဗုံးတွေဖေါက်ခွဲခံရတာအတွက် မြစ်ဖျားခံခဲ့လေမလားလို့ သံသယထားခံရတဲ့တိုင်းပြည် ဖြစ်ပါတယ်။ အဲတာမှန်ကန်မယ်ဆိုရင် ကျွန်တော့်နိုင်ငံနဲ့ ကျွန်တော့် ဘာသာတရားမှာ အိန္ဒိယကိုရော ဗုဒ္ဓဘာသာ ကိုးကွယ်သူများကိုပါ တောင်းပန်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တချိန်တည်းမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် မဟုတ်သူတွေ သေကျေ ပျက်စီးခဲ့ရတာတွေအတွက် နောင်တလဲရမိပါတယ်။
ကျွန်တော့်အနေနဲ့ ဓမ္မဓိဋ္ဌာန်ကျကျ သုံးသပ်ပါမယ်။ နိုင်ငံရေးရှုဒေါင့်ကနေ မြင်ကြည့်မှာပါ။ ကျွန်တော့်အမြင်နဲ့ နိုင်ငံတကာ သုံးသပ်သူတွေနဲ့ မီဒီယာမှာဖေါ်ပြနေတာတွေ ကွဲလွဲတာရှိပါလိမ့်မယ်။
နက်ဖြန် ဇူလိုင်လ ၁၉ ရက်နေ့ဟာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အာဇာနည်နေ့ဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံဖခင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ဖခင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့ လုပ်ဖေါ်ကိုင်ဖက်တွေ ၁၉၄၇ မှာ လုပ်ကြံ သတ်ဖြတ်တာခံခဲ့ရတဲ့နေ့ပါ။ ၁၉၆၂ ဇူလိုင် ၇ ရက်ဆိုတာ ပဌမဆုံး ကျောင်းသားတွေ သတ်ဖြစ်တာခံခဲ့ရပြီး၊ သမိုင်းဝင် ကျောင်းသားသမဂ္ဂအဆောက်အဦကိုလဲ ဒိုင်းနမိုင်းနဲ့ ဖေါက်ခွဲတာ ခံခဲ့ရပါတယ်။ ဒီနှစ် ၂ဝ၁၃ မှာတော့ ဒီသတင်းတွေကို ဖတ်ရပါတယ်။
• 7-7-2013 Two monks injured as serial blasts rock Bodh Gaya ဗုဒ္ဓဂယာမှာ ဗုံးတွေဆက်တိုက်ပေါက်ကွဲ။ နှစ်ဦးဒဏ်ရာရရှိ http://in.news.yahoo.com/two-monks-injured-serial-blasts-rock-bodh-gaya-051835488.html
• 10-7-2013 UN Chief tells Myanmar to make Rohingyas citizens ကုလခေါင်းဆောင်မှ ရိုဟင်ဂျာတွေကို နိုင်ငံသားလုပ်ပေးဘို့ မြန်မာကိုပြောလိုက် http://www.rohingyablogger.com/2013/07/un-chief-tells-myanmar-to-make.html
• 10-7-2013 Jakarta pressing Burma on Rohingya on legal rights ဂျာကာတာမှ ရိုဟင်ဂျာတွေကို ဥပဒေ ခံစားခွင့်တွေ ပေးဘို့ မြန်မာကို ဖိအားပေး http://www.rohingyablogger.com/2013/07/jakarta-pressing-burma-on-rohingya.html
• 10-7-2013 Two Rohingya leaders go shopping for terror in Indonesia by Jakarta ရိုဟင်ဂျာ ၂ ယောက် အင်ဒိုနီးရှား ဈေးဝယ်ရောက် http://democracyforburma.wordpress.com/2013/07/11/2-rohingya-leaders-go-shopping-for-terror-in-indonesia-by-jakarta-post-video/
မွတ်ဆလင်အကြမ်းဖက်သမားတွေက ပါကစ္စတန်ကနေ (တွစ်တာ) သုံးတယ်။ မြန်မာလူမျိုး ၈ဝဝဝဝ က ဖေ့စ့်ဘွတ်ကို သုံးပါတယ်။ မိနစ်တိုင်းမှာ တင်နေကြတာ၊ မှတ်ချက်ပေးနေကြတာတွေ ရှိနေပါတယ်။ ယေဘုယျအားဖြင့် ဗုဒ္ဓဘာသာ မဟုတ်သူတွေကို အပြစ်ဖို့ပြီး အချင်ချင်းဆိုသူတွေလဲ ဆဲရေး တိုင်းထွာနေကြတာတွေရှိနေလို့ ဖေ့စ်ဘွတ်ဟာ အမှိုက်ထုပ်နဲ့ တူနေပါတယ်။ ဒါနဲ့ ကျွန်တော်က နှစ်ပေါင်း ရာချည်ပြီး အတူတူအေးအေးချမ်းချမ်း နေခဲ့ကြတဲ့ မြန်မာမွတ်ဆလင်တွေနဲ့ ဘယ်တိုင်းပြည်ကနေ လာမှန်းမသိသူတွေကို ခွဲခြားမြင်ကြဘို့ ရှင်းရပါတယ်။ နောက်ပြီး သူတို့ကိုယ်သူတို့ ရိုဟင်ဂျာလို့ အခေါ်ခံချင်သူတွေနဲ့ အစွန်းရောက် ဝက်ဘ်ဆိုက်တွေက ဖေါ်ပြနေတဲ့အတိုင်း လက်နက်ကိုင်ပြီး၊ အကြမ်းဖက်ချင်တဲ့ မွတ်ဆလင်တွေ မတူတာကိုလဲ ပြောရပါသေးတယ်။
မြန်မာလူမျိုးသုံးသပ်သူနဲ့ သူ့ရဲ့နိုင်ငံခြားသူဇနီးတို့ကနေ မကြာသေးခင်က ဆောင်းပါးတခုရေးပါတယ်။ ဒေါသနဲ့ စိုးရိမ်မှု ကဲလွန်နေသော လူမျိုးစုံနေရာ ပြည်မြန်မာလို့ ခေါင်းစဉ်တပ်ထားပြီး သူတို့သုံးသပ်ချက် (၃) ရပ်ဟာ စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းပါတယ်။
(၁) ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များအကြား အန္တရာယ်ကျရောက်နေပြီလို့ ထင်မြင်လာစေတဲ့အချက်၊
(၂) နာမည်တပ်ပြီး အရှက်ရအောင်လုပ်တဲ့ဗျူဟာ အလုပ်မဖြစ်ပါ နဲ့
(၃) ယုံကြည့်မှုအပြည့်ရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်မှု လိုအပ်တယ် ဆိုတာတွေဖြစ်ပါတယ်။
ဒိအရင်မှာ ကျွန်တော်လဲ ဆောင်းပါးတပုဒ် ရေးခဲ့ပါသေးတယ်။ ကျွန်တော့်သုံးသပ်ချက်မှာ မြန်မာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေက ဘာသာရေးနဲ့ နိုင်ငံအပေါ်မှာ အန္တရာယ်ကျရောက်နေပြီလို့ မြင်လာကြောင်း ထည့်ရေးခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော်က ၂ဝ၁၂ နှစ်လည်က ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာ အကြမ်းဖက်မှုတွေဖြစ်တော့ နိုင်ငံတကာကနေဝင်လာတဲ့ အရာတွေဟာ မမျှော်မှန်းတာတွေနဲ့ မမျှတတာတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကို ထောက်ပြပါတယ်။ စဖြစ်တဲ့ကာလမှာ ရခိုင်အမျိုးသမီး တယောက်ကို ဒေသခံ မွတ်ဆလင်ယောက်ျားတွေကအနေ အုပ်စုလိုက်အဓမ္မကျင့်ပြီး သတ်ပြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီသတင်းဟာ ဆက်ဖြစ်လာတဲ့ အကြမ်းဖက်မှု သတင်းတွေအောက်မှာ ပျောက်ကွယ်သွားခဲ့တယ်။ ၂၈-၅-၂ဝ၁၂ နေ့က အုပ်စုလိုက် အဓမ္မကျင့်ပြီး သတ်ပြစ်တာခံရတဲ့ မသီတာထွေးဟာ ၁၆-၁၂-၂ဝ၁၂ နေ့က ဒေလီမှာ အုပ်စုလိုက်အဓမ္မကျင့်ခံခဲ့ရသူ အမျိုးသမီးလောက် ကမ္ဘာကို ဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိတာဟာ သူမအတွက်ရော မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ပိုပြီးကံဆိုးစေပါတယ်။
မကြာသေးခင်ကစခဲ့တဲ့ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးအပြောင်းအလဲတွေဟာ ၂ဝဝ၄ ခုနှစ်မှာ မြန်မာစစ်ခေါင်းဆောင်တွေကနေ လေ့လာ ဆန်းစစ်မှုလုပ်ပြီး၊ တရုပ်ရဲ့လွှမ်းမိုးလာမှု အဆမတန်များနေပြီ၊ ဒါဟာ နိုင်ငံအန္တရယ်ဖြစ်တယ်လို့ ကောက်ချက်ချရာကနေ စတယ်ဆိုတဲ့ ဘာတဲလ် လင်နာပြောတာကို သဘောတူပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ တရုပ်လွှမ်းမိုးမှုကို ချိန်ခွင်လျှာညှိဘို့ အနောက်အုပ်စု ဝင်လာနိုင်အောင် တံခါးဖွင့်လိုက်ရပါတော့တယ်။ အနောက်နိုင်ငံတွေကနေ တစိုက်မတ်မတ် တောင်းနေခဲ့တာတွေ အကုန်ဖြစ်လာစေလိုက်တယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ၊ ကလေးစစ်သား၊ မီဒီယာ၊ စီးပွါးရေး အပြောင်အလဲ၊ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ စတာတွေဖြစ်တယ်။
အခုတခါ အပြင်ကနေဖိအားလာပြန်ပါပြီ။ ရခိုင်မှာစတဲ့ပြဿနာနဲ့ဆက်ပြီး လူပေါင်း (၈၈ + ၈ဝ) ၁၆၈ ဦးသေဆုံးပြီး၊ ၇၅ဝဝဝ (အစိုးရ)၊ ဒါမှမဟုတ် ၁၂ဝဝဝဝ ယောက် (လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့) အိုးမဲ့ အိမ်မဲ့ ဖြစ်သွားခဲ့တယ်။ ဒိအရင် ၂-၅-၂ဝဝ၈ နေ့က မြန်မာပြည် အောက်ပိုင်း ကမ်းရိုးတန်းဒေသတွေမှာ နာဂစ်ဆိုက်လုံးကြောင့် လူပေါင်း ၁၃ဝဝဝဝ ယောက် သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ နာဂစ်အတွက် နိုင်ငံတကာ အကူအညီတွေစာရင်းကို (က) ကြီးကနေ (အ) အထိ ဒီလိုရှိပါတယ်။ (စာရင်း မထည့်တော့ပါ။)
၁။ နာဂစ်ဆိုက်ကလုံးအတွက် ကူညီတဲ့အလှူရှင်စာရင်းနဲ့ ရခိုင်ဒေသအတွက်မှာ ကူတဲ့စာရင်း ကွဲပြားတာတွေ့ရတယ်။ နာဂစ်မှာ လူ ၁၃ဝဝဝဝ သေခဲ့တာမို့၊ မြန်မာနိုင်ငံမှာ မွတ်ဆလင်ဦးရေ ၄% ရှိမယ်ဆိုထားလို့၊ သေဆုံးခဲ့နိုင်တဲ့ သင်္ချာလို တွက်လို့ရတဲ့ မွတ်ဆလင်ဦးရေဟာ ၅၂ဝဝ ဖြစ်မယ်။ ရခိုင်အဖြစ်အပျက်မှာ အစိုးရကိန်းဂဏန်းအရ ၈၄ ယောက်၊ ရိုဟင်ဂျာ အပြောအရ သေဆုံးရသူပေါင်း ၁ဝဝဝ ရှိတယ်။ မွတ်ဆလင်တွေ များများသေဆုံးတုံးက ပင်လယ်ကွေ့ဒေသက နိုင်ငံတွေဟာ ဒီလောက်ထူးခြားပြီး မကူခဲ့ပါဘူး။ ရခိုင်အဖြစ်အပျက်ကြမှ ဝင်လာတဲ့ အကူအညီတွေဟာ ရိုဟင်ဂျာ အတွက်သာ ဖြစ်နေတာမို့လားလို့ မေးစရာရှိလာပါတယ်။၊ တနည်းအားဖြင့် ဘာသာရေး (အစ္စလာမ်) အတွက် မဟုတ်ပဲ၊ အကူအညီလိုလို့လဲ မဟုတ်ပဲ၊ လူသားချင်းစာနာမှုထက်ကဲပြီး၊ နာမည်တလုံးအတွက်ဖြစ်နေသလား။
၂။ အချိန်ကွာလို့လား။ ၂ဝ၁၂ မှာ စစ်အစိုးရစ်စစ် မဟုတ်တော့ပဲ အရင်ကထက်ပျော့တဲ့ အစိုးရဖြစ်လာလို့ အခွင့်ကောင်းယူ၊ ရခိုင်အရေးကို အကြောင်းပြုပြီး ရိုဟင်ဂျာအရေးကို ရှေ့တန်းတင်လာတာလား။
၃။ ရခိုင်မှာဖြစ်တော့ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေ၊ သံအမတ်ကြီးတွေ။ ထင်ရှားတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေ ရခိုင်ပြည်နယ်အထိ အခေါက်ခေါက်လာကြတယ်။ ဒီပဲယင်းအရေးအခင်းမှာ အမေရိကန်သံရုံး တခုတည်းသာလာတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ အနှစ် ၂ဝ အတွင်း၊ သန်း ၆ဝ လူထု လူ့အခွင့်အရေးတွေ ချိုးဖေါက်တာကို လှိမ့်ခံနေရတုံးမှာ ကုလသမဂ္ဂ အထူးကိုယ်စားလှယ်သာ လာခဲ့ပါတယ်။
၄။ စင်ပြိုင်အစိုးရ အဖွဲ့ဝင်တယောက်အနေနဲ့ သတိပြုမိတာတချက်လဲ တွေ့ပြန်ပါတယ်။ ကုလသမဂ္ဂမှာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ လူ့အခွင့်အရေး အခြေအနေအစီရင်ခံစာ တနှစ်တခါထွက်ရာမှာ ဂျနီဗာနဲ့ နယူးယော့ အစည်းအဝေးတွေအတွင်း ရခိုင်မှာ ဖြစ်တဲ့ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖေါက်မှုကို တွင်တွင်ပြောလာတဲ့နိုင်ငံတွေဟာ အနှစ် ၂ဝ အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဆုံးဖြတ်ချက်အတွက် တခါမှာ ဦးစီးပြီး အဆိုတင်သွင်းပေးတဲ့ စပွန်ဇာနိုင်ငံမလုပ်ခဲ့ကြပါ။
၅။ ကုလသမဂ္ဂအပါအဝင် နိုင်ငံခြားသားတွေကနေ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်ဥပဒေကို ပြင်ပေးဘို့ ခဏခဏ ပြောနေကြတယ်။ ကျွန်တော် ညံ့သလားတော့ မသိပါ၊ ကမ္ဘာမှာ အဲဒီလို အပြောခံရတဲ့နိုင်ငံဆိုတာ မရှိပါ။
• ဗုဒ္ဓဘာသာ = ၉ဝ့ဝ၄% (မြန်မာဂျာနယ်တခု)၊ ၈၉% (ဝိကီပီးဒီးယား)၊
• ခရစ်ယန်ဘာသာ = ၅့၅၅% (မြန်မာဂျာနယ်တခု)၊ ၄% (ဝိကီပီးဒီးယား)၊
• အစ္စလာမ်ဘာသာ = ၃့၇၁% (မြန်မာဂျာနယ်တခု)၊ ၄% (ဝိကီပီးဒီးယား)၊
• ဟိန္ဒူဘာသာ = ဝ့၇% (မြန်မာဂျာနယ်တခု)၊ ၁% (ဝိကီပီးဒီးယား)၊
• အခြားဘာသာ = ဝ့၆၃% (မြန်မာဂျာနယ်တခု)၊ ၂% (ဝိကီပီးဒီးယား)။
ရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့အမည်ဟာ အပြင်မှာ အလွန်ရေပမ်းစားပေမဲ့ မြန်မာပြည်ထဲမှာ မပြောကြပါ။ အစိုးရရဲ့ ရပ်တည်ချက်ကို အကြိမ်ကြိမ် ပြောထားပါတယ်။ သူတို့ကို ဘင်္ဂါလီ မွတ်ဆလင်တွေလို့ သတ်မှတ်ပါတယ်။ ဘင်္ဂါလီဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်း မမှန်ကြောင်း ကျွန်တော်စာတပုဒ်ရေးထားပါသေးတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံအပြင် ကမ္ဘာမှာတော့ နာမည်တလုံးဟာ၊ ဒုက္ခရောက်နေသူတွေ ခံစားနေရတာအထက် အရေးကြီးနေသလိုဖြစ်နေပါတယ်။ ဒီလူတွေက ရိုဟင်ဂျာ ဆိုတာကို တရားဝင် အခေါ်ခံရဘို့ရာ အသက်၊ သွေးအပြင် ဒေါ်လာနဲ့ သံတမန်လက်နက်တွေကို အကြီးအကျယ် သုံးနေကြတယ်။ ကမ္ဘာကြီးကလဲ ရိုသေကျိုးနွံစွာ လိုက်ပါနေတယ်။
အိုအိုင်စီအထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ပါမောက္ခ အက်မဲလ်ဒင် အစ်ရှန်နိုဂူကနေ မြန်မာအစိုးရကို မွတ်ဆလင်တွေကို ခွဲခြားဆက်ဆံမှုမှန်သမျှ ဖယ်ရှားပြစ်ဘို့၊ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် အစွန်းရောက်တွေကနေ လူမျိုးရေးလှုံ့ဆော်မှုတွေ မလုပ်ကြစေဘို့နဲ့ ၂ဝဝ၅ ခုနှစ် ဥပဒေကနေ ဘူးသီးတောင်နဲ့ မောင်းတောမှာ ကလေး ၂ ယောက်ထက်ပိုမယူရ ဆိုတာဟာ ခွဲခြားဆက်ဆက်မှုဖြစ်တယ်၊ ဒါတွေအတွက် တာဝန်ပေးလိုက်တယ်ဆိုပြီး ဆော်ဒီအာရေးဗီးယားနိုင်ငံ၊ ဂျက်ဒါမြို့မှာ ကျင်းပတဲ့ ရခိုင်ရိုဟင်ဂျာသမဂ္ဂ ကွန်ဂရက်မှာ ပြောလိုက်ပါတယ်။ သူပြောတဲ့နေ့ ဇူလိုင် ၇ ရက်မှာပဲ ဗုဒ္ဓဂယာမှာ ဗုံးတွေကွဲခဲ့ပါတယ်။ မဟာဗောဓိ စေတီတော်ကြီးဟာ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ ပွင့်တော်မူရာနေရာဖြစ်တယ်။ မြန်မာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကတော့ ဘုရားကို လုပ်ကြံဘို့ ကြိုးစားခဲ့တဲ့ ဒေဝဒတ်ကိုသာသတိရကြတယ်။
မူဂျာဟစ် နဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ
ဗုဒ္ဓဂယာဗုံးခွဲမှုမှာ အိန္ဒိယ မူဂျာဟီဒင်တွေ လက်ချက်လားလို့ အိန္ဒိယအစိုးရကန သံသယရှိတယ်လို့ဆိုတာမို့ မြန်မာတွေက မူဂျာဟစ်သမိုင်းကို ရှာပါတယ်။ ဝီကီပီးဒီယားမှာ ဒီလိုတွေ့ရပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံ ရခိုင်မှာ သိသာတဲ့အရေအတွက်နဲ့ မူဂျာဟီဒင်တွေရှိတဲ့တာ ၁၉၄၉ ကတည်းကဖြစ်တယ်။ မားကက်ဆင်က ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တယ်။ မူဂျာဟစ်လို့ခေါ်တယ်။ အများစုက အရှေ့ပါကစ္စတန် (ကနေ့ ဘင်္ဂလားဒက်ရှ်) က လူတွေသာ ဖြစ်ကြတယ်။ မြန်မာစစ်တပ်ကနေ ၁၉၅ဝ မှာ နှိမ်နင်းခဲ့လို့ ဘင်္ဂလားဒက်ရ်ှကို ထွက်ပြေးကြရတယ်။ ကော့စ်ဘဇားမှာ မား ကက်ဆင်အသတ်ခံရပြီး အဖွဲ့ပါ ပြိုကွဲသွားတယ်။ သူတို့ကိုမေးတော့ ရိုဟင်ဂျာလို့ပြောလာကြတယ်။ ရခိုင်မှာ ဆက်ရှိနေတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်း ၁၉၆၂ စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက် နှိမ်နင်းရေးတွေ အတော်ကြာကြာလုပ်ရတယ်။ ၁၉၇၈ နဂါးမင်း စစ်ဆင်ရေးက နာမည်ကြီးတယ်။ ရိုဟင်ဂျာလို့ အခေါ်ခံလိုသူ မူဂျာဟစ်အဖွဲ့ဝင်တွေ ဘင်္ဂလားဒက်ရ်ှကို ထွက်ပြေးကြရပြန်တယ်။ ရခိုင်မှာကျန်ရစ်သူတွေဟာ ဘင်္ဂလားဒက်ရ်ှနဲ့ မလေးရှားက မူဂျာဟီဒင်တွေနဲ့ ဆက်နေတယ်။ အလှူငွေတွေ ရှာတယ်။ ဘာသာရေးနဲ့ရောပြီး စစ်သင်တန်းတွေပေးတယ်။
ရိုဟင်ဂျာ ကင့်ပိန်းက အတော်ကြီးကျယ်ပြန့်ပါတယ်။ ရခိုင်ဘက်ကနေ ပြောတာ။ ရေးတာ၊ ရိုဟင်ဂျာ ဘက်ကနေ ပြောတာ၊ ရေးတာတွေက ဝန်ရိုးစွန်းနှစ်ဘက်လိုဖြစ်နေတယ်။
လုပ်ချလိုက်တဲ့ နိုင်ငံတကာ မီဒီယာ
ဇူလိုင်လမှာ တကမ္ဘာလုံးကနေ တိုင်းမ်မဂ္ဂဇင်း မျက်နှာဖုံးဓါတ်ပုံနဲ့ သတင်းဆောင်းပါးကို ဖတ်ကြရတယ်။ အဲလို လူ (အဖွဲ့) ကို နာမည်တပ်ပြီး အရှက်ခွဲတဲ့ နည်းဗျူဟာကနေ တင်းမာမှုတွေကို လျှော့နေမဲ့အစား မတူတဲ့ဘက်တွေကို အဝေးကို ပို့ပြစ်ရာကျပါတယ်။
ဒိအရင်ကလဲ ဘီဘီစီကနေ မြန်မာနိုင်ငံက တိုင်းရင်းသားမျိုးစုံကို ဖေါ်ပြတဲ့ မြေပုံတခုကို သူ့ဝက်ဘ်ဆိုက်မှာ ဖေါ်ပြခဲ့တယ်။ ရခိုင်ပြည်နယ်နေရာမှာ ရိုဟင်ဂျာလို့သာ ဖေါ်ပြထားတယ်။ အမှန်ဆိုရင် ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ လူဦးရေ စုစုပေါင်း (၂ဝ၁ဝ စာရင်းအရ) ၃၈၃၆ဝဝဝ ရှိတယ်။ လူမျိုးတွေနဲ့ ဘာသာတွေကတော့ ရခိုင် (ဗုဒ္ဓဘာသာ)၊ ချင်း (ခရစ်ယန်)၊ ကမန် (ဗုဒ္ဓဘာသာ + အစ္စလာမ်) တွေနေထိုင်ကြတာဖြစ်တယ်။ ဒါကိုမကျေနပ်လို့ ဆိုရှယ်ကွန်ယက်တွေကနေ ပွက်လောညံတော့မှ ၆-၁၁-၂ဝ၁ဝ မှာ ပြန်ပြင်ပေးတယ်။ ဒါတောင်တောင်မှ ရခိုင်လို့ စာသားပြင်ပေးပေမဲ့ ရိုဟင်ဂျာ ဓါတ်ပုံကို ဆက်ထည့်ထားတယ်။ ဘီဘီစီရဲ့ဒီလိုလုပ်တာဟာ မတော်တဆမှားတာလား၊ တမင်တကာခြေလှမ်းလား စဉ်းစားစရာဖြစ်တယ်။
အိန္ဒိယနိုင်ငံသား မြန်မာ့အရေးသုံးသပ်သူ ကာနယ် ဘီ ဟာရီရာမန်ကနေ ရိုဟင်ဂျာအရေးဟာ ဘင်္ဂလားဒက်ရ်ှနဲ့ အရှေ့တောင်အာရှမှာ နောက်ဆုံးခြေကုပ်ယူဘို့ ကြိုးစားနေကြတဲ့ အစ္စလာမ်းမစ်အစွန်းရောက်တွေအဖို့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ခြေကုပ်သစ်တခု ရကောင်းရလာနိုင်တယ်လို့ ရေးပါတယ်။ သူ့သုံးသပ်ချက်သာမှန်ရင် ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်၊ နောက်တိုက်ပွဲဟာ မြေနေရာကွက်အတွက်ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော် မှားပါစေလို့ ဆုတောင်းပါတယ်။
အကြမ်းဖက်အုပ်စုတွေဟာ ဒီဒေသတွင်းမှာတော့ ပျော့တဲ့ပြစ်မှတ်တွေကို ရွေးပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဂယာဟာ ပျော့ယုံသာမကပါ၊ သည်းခံခွင့်လွှတ်မှုတရားနဲ့ ပြည့်နေတဲ့နေရာတခု ဖြစ်ပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဂယာကို တိုက်ခိုက်မှုဟာ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ ဆက်စပ်နေ-မနေ ဆိုတဲ့ ဆင်ခြေက သိပ်ကြီးမခိုင်မာလှပါ။ တကယ်ဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံတလွှား ဘုရားကျောင်းကန်၊ စေတီပုထိုးတွေဟာ အကာအကွယ်ရယ်လို့ ကင်းမဲ့သလောက်ပါ။ တိုက်ခိုက်ချင်ရင် အင်မတန်လွယ်တာပါ။
အခုအရေးကိစ္စမှာ ကမ္ဘာကြီးက မြန်မာနိုင်ငံကို အပြစ်ဖို့ပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလဲ နှစ်ဖက်လုံးက အပြစ်တင်ကြပါတယ်။ နိုင်ငံရေးအရပြောရရင် ဒီဘာသာရေးပဋိပက္ခက ရပ်သွားစရာမရှိပါ။ ဗုဒ္ဓတရားအရ ပြောရရင်လဲ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်တရားတော်အရ အကြောင်းတရားတွေကနေ အကျိုးတရားတွေ အစဉ်မပြတ်ဆက်ဖြစ်နေတာသာဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံ ပြင်ပကနေလာတဲ့ ဖိအား၊ တွန်းအားတွေကနေ ပြည်တွင်းမှာ တခါမှမကြုံဘူးတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာ ဘက်ကနေ လှုံ့ဆော်မှုတွေကို ဖြစ်ပေါ်လာစေပါတော့တယ်။ မျိုးစောင့်ဥပဒေအဆိုတင်တာ၊ ၉၆၉ လှုပ်ရှားမှု စတာတွေဖြစ်လာတယ်။ ထောက်ခံသူတွေနဲ့၊ ပြစ်တင်ဝေဖန်သူတွေရှိတယ်။ တကယ်တော့ မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာတက္ကသိုလ်တွေ၊ စာသင်တိုက် ကြီးငယ်တွေ၊ ဘုန်ကြီးကျောင်းတွေ၊ တရားစခန်းတွေမှာ အမုန်းတရားကို သင်ကြားပို့ချတယ်ဆိုတာ လုံးဝ မရှိပါ။ ဒါပေမဲ့ အားလုံး သိတဲ့အတိုင်းပါဘဲ ဘယ်ဘာသာတရားမှာမဆို ဘာသာရေး အဆုံးအမရဲ့ တကယ့်အဆီအနှစ်ကို လိုက်နာ ကျင့်ကြံသူအရေအတွက် အပြည့်ရှိတာမဟုတ်ပါ။
တကယ်လို့သာ တိုင်းပြည်အန္တရာယ်၊ ဓမ္မန္တရာယ်လို့ ထင်မှတ်တာက တကယ်မရှိမှန်း သိလာမယ် ဆိုရင်တော့ ဘာသာရေးအစွန်းထိရောက်အောင် လှုပ်ရှားမှုဆိုတာလဲ ရပ်စဲသွားမှာပါ။ ဒီလိုဖြစ်ဘို့ရာ ကမ္ဘာကနေ ရှုတ်ထွေးလှတဲ့ မြန်မာ့အရေးကို အမှန်အတိုင်း နားလည်မှသာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
၇-၇-၂ဝ၁၃ ဗုဒ္ဓဂယာမှာ ဗုံးမခွဲခင်၊ ၅-၄-၂ဝ၁၃ အင်ဒိုနီးရှား ထိန်းသိမ်းရေးစခန်းမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ၈ ဦး သေဆုံးပြီး၊ ၁၅ ဦး ဒဏ်ရာရခဲ့ရတယ်။ ဇွန်လထဲမှာ မလေးရှားနိုင်ငံ၊ ကွာလာလမ်ပူမှာလဲ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေ အနည်းဆုံး ၄ ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်။ ဒါ့ကြောင့် အိန္ဒိယနဲ့ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေမှာ မြန်မာနိုင်ငံက ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအန္တရာယ်ကနေ ကင်းဝေးပါစေလို့ ဆုတောင်းပါတယ်။ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။
လော်ဘီနည်းနဲ့ အကြမ်းဖက်နည်းသုံးသူတွေဟာ နာမည်စစ်ပွဲကိုအနိုင်ရသွားပြီး အခု နယ်မြေတိုက်ပွဲဆင်နွှဲနေကြပါတယ်။ ဆောရီး။ ကိုယ်ကျိုးစီးပွါးအတွက် သူတို့နာမည်ကိုအသုံးချသူတွေလည်းရှိတယ်။ တိုင်းပြည်နာတယ်။ အစိုးရနဲ့ စစ်တပ် တသံတည်းမတွက်နိုင်ကြသေးတာ တိုင်းပြည်အတွက်မကောင်းပါ။ ဆောရီး။